2011-11-13 ~ Myanmar Express
ဒီမိုကရေစီ အတောင်းဆိုဆုံး ရန်ကုန်မှာ ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်လူသတ်မှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်
ဒီမိုကရေစီအတောင်းဆိုဆုံး ရန်ကုန်မြို့မှာ ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်လူသတ်မှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က လူအတော်များများဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေ၊ လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အမြဲတောင်းဆိုနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မေရိကန်နဲ့ ခေတ်မှီနိုင်ငံကြီးများက နိုင်ငံသားများကို အားကျကြပြီး ဇတ်လမ်းတွေကိုကြည့်ကာ အတုယူနေကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုရီးယားကားကြည့်သူများကလည်း ကိုရီးယားပုံပေါက်နေသလို သရဲကားကြည့်သူများကလည်း သရဲပုံပေါက်နေကြပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက ဇတ်လမ်းထဲကအတိုင်း လူသတ်ကြတာပါပဲ။ လုံခြုံရေးသမားတွေကိုလည်း ဂရုမစိုက်၊ ရဲတွေကိုလည်း လေးစားရမှန်းမသိ၊ ရပ်ကွက်နဲ့ မြို့နယ် လူကြီးများကိုလည်း မထီမဲ့မြင်တွေလုပ်ကာထင်ရာစိုင်းနေကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန်းခွန်းထဲမှာ ပြောဖူးသလိုပဲ ဒီမိုကရေစီရပြီဆိုပြီး လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဘိန်းရှူတတ်တဲ့လူတွေ များနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး ဒီမိုကရေစီ အဆင့်မှီ အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ MTV ခေတ်ဦး ကာလကတည်းကပင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အသက် ၄၀ ခန့်အရွယ် အနုပညာရှင် တစ်ဦးကို ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းမပေါ်တွင် အက်ရှင်ကားမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းဆန်ဆန် ကားဖြင့် တရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်ကာ ရက်စက်စွာ အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း အသတ်ခံခဲ့ရသော ဒါရိုက်တာ၏ မိသားစုများနှင့် မျက်မြင် တွေ့ကြုံခဲ့သူများကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ကြီးဈေးရှိ ၃၆၉ စားသောက်ဆိုင်တွင် သေဆုံးသူ ဦးသန့်ဇင်လတ် (ခ) ဦးဇင်မင်းသည် သူငယ်ချင်း တစ်စုနှင့် အတူ ညစာ စားသောက်နေစဉ် ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်၌ အနီးဝိုင်းရှိ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အမျိုးသား နှစ်ဦးနှင့် ဦးသန့်ဇင်လတ်တို့ ဝိုင်းမှ သူငယ်ချင်းတို့ စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဦးသန်းထိုက်ကို ထိုးကြိတ် ကန်ကြောက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အမျိုးသားနှစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း၊ ဦးသန်းထိုက်မှာ ယင်းဆိုင်၌ပင် ဒဏ်ရာများနှင့် ကျန်ရှိခဲ့ပြီး ဦးသန့်ဇင်လတ် (ခ) ဦးဇင်မင်းသည် ၎င်းတို့နောက်သို့ လိုက်ရန်အတွက် သူငယ်ချင်း ဦးနိုင်မိုး စီးလာသော အငှားယာဉ်ဖြင့် နောက်မှ လိုက်ပါခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ၄၅ လမ်းထောင့်၌ ထွက်ပြေးသူ နှစ်ဦး စီးသွားသော Super Custom ၈ဈ/ ၄၄၃၅ ကို မီလာသဖြင့် ဦးသန့်ဇင်လတ် (ခ) ဦးဇင်မင်းက အငှားယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းကာ ယာဉ်မောင်းဘက်ခြမ်းသို့ သွားရောက် ပြောဆို မေးမြန်းစဉ် ၎င်းကို ယာဉ်မောင်းနှင်သူက လည်ပင်းမှ ချုပ်သိုင်းကာ ကားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ၄၅ လမ်းထောင့်မှ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း အတိုင်း ၄၅ လမ်း၊ ၄၆ လမ်းကို ကျော်လွန်ကာ ၄၈ လမ်းထိပ်အထိ တရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်သွားရာ လမ်းမ၌ ရပ်နားထားသော ယာဉ်နှစ်စီးနှင့် တိုက်မိကာမှ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း အသတ်ခံရသူ ဦးသန့်ဇင်လတ်၏ ညီဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝေလတ်က ပြောပါတယ်။"သူဆုံးတာ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်။ ဆေးရုံရောက်မှ သိတာ။ ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက် အရတော့ နံရိုးတွေ ကျိုးပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ ကလီစာတွေကို စိုက်ပြီး ဆုံးတယ်လို့ ပြောတယ်။ နံရိုးအကောင်း တစ်ချောင်းပဲ ကျန်တယ် " ဟု ၎င်းက ဆိုပါတယ်။အမှု ပတ်သက် ပြီး ပုဇွန်တောင် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက (ပ)၂၃၃/ ၂၀၁၁၊ ပုဒ်မ ၃၀၂ အရ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ လောက်က မြောက်ဥက္ကလာပမြို့၊ နွယ်သာကီ ၆လမ်းသို့ ညအချိန် ကားများဖြင့် ဝင်ရောက်လာပြီး လိုက်ပါလာသည့် လူ ၂ဝဝန်းကျင်ခန့်က ရပ်ကွက်နေ လူလတ်ပိုင်းတစ်ဦးအား ဓားရှည်များဖြင့် ဝင်ရောက်ခုတ်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဖြစ်ပွားပုံမှာ ယင်းနေ့ည ၈း၃ဝ ခန့်အချိန်တွင် မြောက်ဥက္ကလာ၊ နွယ်သာကီ လမ်းမကြီးအတိုင်း လိုက်ထရပ်ကားတစ်စီး၊ ဂျစ်ကား တစ်စီး နှင့် တက္ကစီတစ်စီး အပြင်းဝင်ရောက် လာပြီး နွယ်သာကီ ၆ လမ်းထိပ် တွင် ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ လိုက်ထရပ်ကားပေါ်တွင် လူ ၂ဝ ခန့်ပါလာသည်ဟု ကိုယ်တွေ့မြင် ခဲ့ရသူများက ဆိုပြီး ၄င်းတို့မှာ ကားပေါ်မှ ဓားရှည်များဖြင့် ဆင်းကာ အရက်ဆိုင် အတွင်း ထိုင်သောက်နေသော ကိုကျော်မင်းအား ဦးတည်ထိုးခုတ် ခဲ့ကြကြောင်း၊ ရုတ်တ ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဆိုင်အတွင်းရှိ ကိုကျော်မင်း၏ သူငယ်ချင်းအချို့နှင့် စားသုံးသူများမှာ တစ်စုံတစ်ရာ တားမြစ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကိုကျော်မင်းမှာ ဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး ၆ လမ်းအပေါ်ရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ဝင်ရောက်ပုန်းရှောင်နေခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသူများက ပြောပါတယ်။ ကားတွေ က နံပါတ်တွေကို အုပ်ထားကြောင်းနဲ့ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆိုင်ထဲဝင်သွား ကြကြောင်း၊ အပြင်မှာ ကျန်တဲ့သူတွေ က ဓားတွေ ယမ်းပြီး မဆိုင်တဲ့သူ မကပ်နဲ့လို့အော်ကြကြောင်း၊ ကိုကျော်မင်း ပြေးထွက်လာပြီး လမ်းထဲက ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ ရေတောင်းသောက်ပါ သေးကြောင်း၊ သူသေတော့မှာကို လည်း ပြောသွားကြောင်း ၄င်းအား ဆေးရုံပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူလူငယ် တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ကိုကျော်မင်းမှာ ယင်းဆိုင်တွင်ဝင်ပြီး ရေသောက်ပြီးနောက် အပြင် ပြန်ထွက်ခဲ့ရာ လမ်းမပေါ်သို့ လဲ ကျသွားခဲ့ကြောင်း ဆက်ပြောပါတယ်။ကိုကျော်မင်းကို သတ်ဖို့ အတွက် သက်ဦးက လူမိုက်တွေ ကို ၂၅ သိန်းပေးပြီး ငှားထားတယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။ဒီလူတွေ ဒီသတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့တော့ ရင်လေးစရာပါပဲ။ ရန်ကုန်မြို့က လမ်းတွေပေါ်မှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းသံတွေ၊ ဆဲသံတွေ အမြဲကြားနေရကြောင်း၊ ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်၊ သတ်မယ်ဖြတ်မယ်လို့ ဆိုတဲ့အသံတွေက အချိန်တိုင်းလိုလိုကြားနေရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့နေ့ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။"ရန်ကုန်မြို့က လူပေါင်းစုံလာတော့ စရိုက်ပေါင်းစုံလာတယ်၊ စုံလာတဲ့စရိုက်တွေကလည်း ကောင်းတဲ့စရိုက်တစ်ခုမှ မပါဘူး။ ကားပေါ်ကလူက အောက်ကလူကို အော်ဆဲတယ်၊ အောက်ကလူက ကားပေါ်ကလူကို ပြန်အော်ဆဲတယ်... ပြဿနာ သေးသေးလေးတစ်ခုခုဖြစ်ရင် လူစုပြီး မိုက်ကြေးခွဲကြတယ်... လူကြီးကိုလည်း လူကြီးမှန်းမသိဘူး ရဲကိုလည်း ရဲမှန်းမသိဘူး... လူတွေစည်းကမ်းအရမ်းပျက်လာတယ်..." လို့ ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေအများဆုံးမြို့၊ လူသတ်မှုအများဆုံးမြို့၊ မီးလောင်မှုအများဆုံးမြို့၊ ယဉ်တိုက်မှုအများဆုံးမြို့၊ ခိုးဝှက်လုယက်မှု အများဆုံးမြို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုသူ အများဆုံးရှိရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက အစိုးရရုံးစိုက်ရမြို့ဖြစ်ပြီး အခုတော့ အစိုးရရုံးကိုနေပြည်တော်ကိုရွေ့ပြောင်းပြီး နေပြည်တော်ကို အစိမ်းရောင်မြို့တော်အဖြစ် တည်ဆောက်နေချိန်မှာ ရန်ကုန်က အမှိုက်ပုံမြို့တော်ဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ပအခြေစိုက် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးသမားတစ်ယောက်ကတော့ ဒါဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အပြစ်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ လွတ်ငြိမ်းသာခွင့်တွေ ပေးခြင်းကြောင့် လူမိုက်များက ထောင်ကနေ ပြန်ထွက်လာရကြောင်း၊ နောက်ထပ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေ ထပ်ပြီးမပေးသင့်ကြောင်း သုံးသပ်သွားပါတယ်။
၂၀၁၄ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး မြန်မာနိုင်ငံ ရရှိ လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ရရှိမည့် အကျိုး ကျေးဇူးများနှင့် ထိုတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်စဉ် ကြုံတွေ့ရနိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများကို ပညာရှင် အချို့နှင့် နိုင်ငံ ရေး အထူးစိတ်ပါဝင်စား သူအချို့ကို မေးမြန်း၍စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ထိုရာထူးအတွင် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်မှ (၁၉)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် (၁၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး တွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ ဇော်ဦး အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလုပ်ရမယ့် နှစ်က ၂၀၁၄ ဖြစ်တဲ့အ တွက်ကြောင့်မို့ ၂၀၁၄မှာ ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ရမယ့်လူက ၂၀၁၅ AEC ဖြစ်နိုင် ရေးအတွက်ကို အစအဆုံးတာဝန်ယူပေး ရမယ့်တာဝန်ရှိလာတာပေါ့။ အဲဒီလိုရှိလာပြီဆိုရင် အပြု သဘောပြောရရင် တစ်ခုခုကို တာဝန်ရှိလာပြီဆိုရင် တာဝန်ကျေကျေလုပ်ပေးရမယ့် အခြေအနေက တွန်းပို့ လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးကိစ္စ လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးတွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ တစ်ပါတည်း လုပ်နိုင်မယ့် အနေအထားအခွင့်အလမ်း တစ်ခုရလိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အခွင့်အလမ်းကိုသာ ကျွန်တော်တို့ ပီပီသသ လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ၂၀၁၄ မှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ရကြိုး နပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဓိက တော့ ကျွန်တော်တို့ ဝန်နဲ့လာမယ့် လှိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လှေနဲ့ တန်ပါ့မလား။ လှိုင်းလုံးက ကြီးကြီးလှေ က သေးနေရင် လှိုင်းကြီးအောက် လှေမြုပ်သွားနိုင်တယ်။ ကိုယ့်လှေ ကို အရင်ကြီးအောင် လုပ်ထားဖို့လို တယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လှေပေါ်မှာ ပဲ့ကိုင်တဲ့ လူတွေတော်မယ်ဆိုရင် လှိုင်းကြီးလှေကြီးပေ မယ့် အခက်အခဲ မရှိနိုင်ဘူး။ ကျွန် တော် ထပ်တလဲလဲ ပြောနေတာ လူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နဲ့ စွမ်း ဆောင်ရည် အရေးကြီးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းအား ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာအ ကျိုးရှိနိုင်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက တော့ အန်တီအမြင်ကတော့ မြန် မာနိုင်ငံအတွက် တကယ် အကျိုးရှိ နိုင်တဲ့ကိစ္စက အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ် ရေး၊ မဖြစ်ရေး မဟုတ်ဘူး။ ပြည် သူတွေက ကျေနပ်ရေး၊ မကျေနပ် ရေးပဲဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေက ငါတို့ရဲ့ နိုင်ငံဟာ တိုးတက်လာ တယ်။ ငါ့တို့ရဲ့ ဘဝတွေဟာ ကောင်း မွန်လာတယ်ဆိုတာကို ခံစားရပြီ ဆိုရင် ဘယ်ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနဲ့မှ နှိုင်း လို့မရတဲ့ဆုလာဒ်တစ်ခုပဲလို့ အန်တီကတော့ ဒီလိုပဲ မြင်တယ်။ ဦးမော်သန်း (စီးပွားရေး ပညာရှင်) အခွင့်အလမ်းအနေနဲ့ ကိုယ့် တိုင်းပြည်နဲ့ အာဆီယံ အဝန်းအ ဝိုင်းရဲ့ တိုးတက်ကြောင်း အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပေါ့။ အာဆီယံ အင်တီဂရေးရှင်းကလည်း ဥက္ကဋ္ဌ သက်တမ်းဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၅ မှာ ရှိတဲ့အတွက် အာဆီယံရဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် တာဝန်ကျရောက်လာမယ်။ ပိုပြီးတာဝန်ကြီးပါတယ်။ မှူး (နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးရှင်) အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာ ရယူ ရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံအသိုင်းအဝိုင်း၌ တန်း တူရည်တူဖြစ်မှု၊ လူရာဝင်မှု၊ Image Promotion နှင့် Nation Branding ပြုလုပ်နိုင်မှုကို ကိုယ် စားပြုဖော်ညွှန်းနေသည်။ အဓိက အချက်မှာ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံ သားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်သည်။ မကြာတော့သည့် ကာလအတွင်း Global Power အဆင့် ကူးပြောင်း တက်လှမ်းတော့မည့် အာရှအင် အားကြီးနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကြားရှိ The Land in the Clash of Civilization ဖြစ်၍ အခွင့်အ လမ်းရော စိန်ခေါ်မှုများပါ ရော ယှက်ကြုံတွေ့နေရသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌနေရာ ရယူခြင်းသည် မိမိနှင့် ထိုက်တန်သည့် နေရာမှန်ကို ပြန် လည် ရယူ နိုင်ရန် တက်လှမ်းလိုက်သည့် ခြေ လှမ်းဖြစ်သည်။Credit :7Day News Journal
ဆန္ဒပြလိုက် ဘီယာသောက်လိုက်လုပ်နေသော နိုင်ငံရေးသမား ခွေးရူးတစ်ကောင်အရင်တုန်းက ဒေါ်စုဘက်တော်သားနဲ့.....စစ်တပ်အားပေးသူသာရှိသည်..။ ယခုအခါတွင် လူတစ်စုအသစ်ပေါ်ထွက်လာပါသည်..။ ထိုသူများမှာ.. ဘယ်ဘက်ကိုအားပေးမှန်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မသိပါ..။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးသာယာလှပမှာကို အလွန်စိုးရိမ်နေသောလူတစ်စုဖြစ်ပါသည်။ ထူးခြားသည်မှာ ထိုသူများသည်..မြန်မာနိုင်ငံသားများပင်ဖြစ်နေပါသည်..။ ထိုသူများမှာ ခွေးရူးများနဲ့တူပါသည်..။ ဦးတည်ချက်မရှိ ..ရည်မှန်းချက်မရှိသောသူများဖြစ်သည်..။ လမ်းတွင်တွေ့သမျှသော အရာမှန်သမျှကို ကိုက်မည် ..။သတိထားပါ..။ခွေးရူးကောင်းစားတစ်မွန်းတည့်...။ သို့သော်ထိုတစ်မွန်းတည့်မရောက်မှီ ..ထိုခွေးရူးမှာ..အဆိပ်ရှိပါသည်..။ သတိရှိပါ..။ သို့သော်ထိုခွေးရူးမှာ သူများရိုက်သတ်လို့ သေရမှာ မုချ ဖြစ်ပါကြောင်း.......( မြန်မာတွေရွှေဖြစ်ပါစေ)
လိုင်ဇာဌာနချုပ်တွင် စုစည်းထားသော အမျိုးသမီးများနှင့် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လူမှုရေးဖောက်ပြန်နေ
036 Myanmar Express
အခုတလော မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာ ရေဘေးဒဏ်ကြောင်. တချို.ပြည်သူတွေ ဒုက္ခခံစားနေကြရသလို မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်က တချို.ဒေသတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေ ပြည်တွင်းစစ်ဘေးဒဏ်ကို ခါးစီးခံ နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေ မျှော်လင်.တဲ. စစ်ပြီးဆုံးတဲ.တနေ.ရောက်မလာနိုင်ဘဲ အနေအထိုင်ဆင်းရဲခြင်း ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာတွေကိုသာ ပိုမိုခံစားနေကြရပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း စစ်ကျေးကျွံ ဘ၀ရောက်နေရပါတယ်။ စစ်ကိုအလုပ်အကျွေးပြုရခြင်းနှင်. စစ်ဧ။်ဓားစာခံ ဘ၀ကိုရောက်နေကြရပါတယ်။ ပြည်နယ်တွင်းမှာ ကေအိုင်နဲ. မြန်မာ.တပ်မတော် တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည်မှာ ၅လကျော်ကြာမြင်.ခဲ.ပြီဖြစ်သော်လည်း ပြည်တွင်းစစ်မီးကတဟုန်းဟုန်းတောက်လောင် အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ လွန်ခဲ.တဲ.လကတည်းက လူ.အခွင်.အရေးနဲ.ပါတ်သက်ပြီး တပ်မတော် ကဘော်ဒါဆွဲတဲ. မြစ်ကြီးနား သတင်းနဲ.အတူ ကေအိုင်အေ ရဲ. လူ.အခွင်.အရေးချိုးဖောက်နေတဲ. တိကျမှန်ကန်တဲ.သတင်းတခု လိုင်ဇာ ဘက်ကနေရရှိခဲ.ပါတယ်။ ကေအိုင်ကေကို ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရေးသားခြင်းမဟုတ် ၊ လူအအခွင်.အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ. ဓားစားခံဘ၀ ရောက်နေရတဲ. ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို စာနာသောအားဖြင်.ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကေအိုင်အေဟာ သူ.လူမျိုးကိုချစ်တတ်သလောက် လူမျိုးရေးအင်မတန်ခွဲခြားသော လူတန်းစား တရပ်လည်းဖြစ်ပါသည် ။ အခုလောလောဆယ် သတင်းအရ ဗမာလူမျိုးဟေ. လို.ဆိုလျှင် အသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိတော.ပြီ၊ ထိုအကြောင်းကို ကေအိုင်အေနှင်.နီးစပ်သူများပိုပြီး သိပါလိမ်.မည်။ ကေအိုင်ကေဟာ မြန်မာ.တပ်မတော်နှင်. တိုက်ပွဲရှည်ကြာ ဖြစ်ပွားနေသည်နှင်.အမျှ အင်အားကျဆင်းလျက် ရှိပါတယ် ။ ရိက္ခာလည်ပတ်မှုအတွက် ဒေသခံတွေဆီက အလွယ်တကူ လက်ဖြန်.တောင်း၍ ပေးနေကြ ရပါသော်လည်း စစ်သားအင်အားဖြည်.တင်းရန်အတွက် မြစ်ကြီးနားမြို.နယ်၊ ၀ိုင်းမော်မြို.နယ် နဲ. တခြား မြို.နယ်တွေမှာ ရှိတဲ. ကျေးရွာတွေဆီ လူအင်အားပေးရန်အတွက် ရပ်ရွာလူကြီးတွေကို အမိန်.ပေးပြီး အတင်းခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။ ကေအိုင်အေ တပ်မတော်ရဲ. အခြေအနေကို သိနေတဲ. ပြည်သူမိဘတွေက သူတို.သားသမီးတွေကို မပေးရက်ပေမယ်. ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ. ကေအိုင်အေ ရဲ. သေချာဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု မရှိဘဲ အလွယ်တကူ သတ်ဖြတ်လေ.ရှိတဲ. အပြုအမူတွေကြောင်. မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ ငိုငိုရီရီနဲ. သူတို.သားသမီးတွေကို သေမင်းလက်ထဲ ထိုးအပ်နေကြရပါတယ် ။ ရပ်ရွာထဲက ခေါ်ယူလာတဲ.သူတွေကို စစ်ရေးပင်လေ.ကျင်.ဖို.အချိန်မရ ချက်ချင်း လက်ထဲကို သေနတ်ထိုးအပ်၊ ယူနိဖောင်းအပ်ပြီး စစ်တိုင်းခိုင်းနေတယ်လို.လည်း ကြားရပါတယ်။ထိုအကြောင်းကို လူ.အခွင်.အရေး လုပ်ရှားနေသူတွေနဲ. တာဝန်ရှိသူတွေ အနီးကပ်လေ.လာဖို. တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကေအိုင်အေဟာ မိဘဆွေမျိုးတွေကို အလုပ်အကျွှေးပြုနေတဲ. ပြည်သူ.ရင်သွေးတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လူအခွင်.အရေးချိုးဖောက်နေတာကို ပြည်သူတရပ်လုံး လူသားချင်းစာနာတဲ.အနေနဲ. ၀ိုင်းဝန်းကန်.ကွက်ကြပါ။ သေးငယ်တဲ. အဖွဲ.အစည်းတခုရဲ. အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ကြားခံပြည်သူတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှု များလှပါတယ်။ နယ်သားတွေရဲ. အထောက်အပံ.တွေကို ယူပြီး အသက်ကိုလည်းခြိမ်းခြောက်နေကြပါတယ်။ ရပ်၇ွာထဲကရှိသမျှ ဆက်သွယ်ရေး ကိရီယာနဲ. လမ်းတံတားတွေကိုလည်း ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနေတယ်လို.လည်းသိရပါတယ်။ စစ်ရဲ. ဒဏ်ကြောင်. အအိပ်ပျက်အစားပျက် ခံစားနေကြရတဲ. ပြည်ူတွေခမျာ ပြေးစရာမြေမရှိတော.ပြီ အားကိုးစရာဆို၍ နထ္ထိ ။ လူ.ဘ၀လုံခြုံမှု လူအခွင်.အရေးနှင်. ကင်းဝေးနေကြရသည်။ ထိုအကြောင်းကိုလည်း ရေငုံနှုတ်ဆိတ်နေရတယ်။ ကြားထဲကနေ မဟုတ်မမှန်သတင်းလွင်.နေတဲ. ကချင်းသတင်းဌာနတွေ၊ မီဒီယာတွေကိုလည်း အလွယ်တကူမယုံမိစေရန် ပြည်သူများအား သတိပေးလိုပါသည်။ မြစ်ကြီးနားမြို. လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှု ကိစ္စကို ကချင်သတင်းဌာနတွေက ဓါတ်အားလိုင်းကို မြန်မာတပ်မတော်က လက်နက်ဖြင်.ပြစ်ဖောက်၍ ပျက်စီးကြောင်း သတင်းလွင်.ခဲ.ပါသော်လည်း ၊တိကျတဲ. မြစ်ကြီးနားက သတင်းအရ ကေအိုင်အေကပင် ဖျက်ဆီးကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မည်သို.မှအထင်လွဲစရာမရှိပေ ကေအိုင်အေက တခုခုဆိုလျှင် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ထိပ်ဆုံးကဖျက်ဆီးနေသူများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုလိုဆောင်းဝင်လာတဲ.အချိန်မှာ စပါးခင်းတွေက ရိပ်သိမ်းဖို.အချိန်တန်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း နယ်ခံတွေက ကြောက်လှန်.နေရတဲ. အတွက်ကြောင်. အပြင်ထွက်ပြီး စပါးရိတ်သိမ်းဖို.မပြုနိုင်ကြသေးလို.လည်းကြားရပါတယ်။ by Myo Chitthu Myanmar Express
ရဟန်းတော်တွေလဲ နိုင်ငံရေး လုပ်ခွင့်၊ ဆန္ဒပြခွင့် ရှိပါတယ်.... ဒါပေမဲ့..
ရဟန်းတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်မရှိဘူး ရှိတယ်ဆိုပီး ငြင်းနေကြာတာနဲ့ပါတ်သက်လို့ပါ.... လုပ်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့လူကလည်း သာသနာ့ အာဇာနည် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမတို့ ဦးဝိစာရတို့ကို ထုတ်ပြကြတယ်။ မကျေလည်ရင် ဒီဆြတော်တွေပါသွားပြောပေါ့.... ဟုတ်ပါတယ် ကောင်းပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ကြည့်လုပ်ကြပါဦးဆရာတို့ရယ်... ကိုယ်မြှောက်ပေးတဲ့ ဇာတ်က ဒီတစ်ဇာတ်ထဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာမမေ့စေချင်ဘူး.... နောက်တစ်ခုက နိဗ္ဗာန်တံခါး ခုချက်ခြင်း ဖွင့်၊သောတပန်အဆင့် ခုချက်ခြင်းပေး ဆိုသလိုဖြစ်နေသလားလို့......ရဟန်းတွေလဲ ပုထုဇဉ်ပဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုပီးဇောင်းပေးလုပ်ချလာမှဖြင့် ခက်ကုန်ရော့မယ်။ မလုပ်နဲ့လို့လည်းသွားတားလို့မရ အရင်တုန်းက ဒေ၀ဒတ်ကဘယ်သို့ ဘယ်ချမ်းသာ၊ ဦးလာဘကဖြင့်ဘယ်လိုပုံ လူတွေသတ်စားခဲ့တာနဲ့ သူတို့လည်း ဥပမာ ဥပမေးယျတွေနဲ့ကိုင်ထုတ်လာမယ်ဗျ နော်။ ဟုတ်ပါတယ် နောက်ခံအခြေအနေ ဖြစ်ပျက်ပုံအနေအထားမတူပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆွဲဆက်ပီး ရောထွေးတတ်တာ ကျုပ်တို့လူမျိုးဝါသနာတွေလေဗျာ။ ရှိပါသေးတယ် ရဟန်းအခြင်းခြင်း မနာလိုစိတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ သက္ကတာဂါမ်အဆင့်ကနေ မတက်နိုင်လို့ မာန်ချရှိခိုးခဲ့ရတာတွေ။ ကိုယ်တွေက ကောင်းတာကို လက်ညှိုးထိုးပေမဲ့ မကောင်းတာကိုဥပမာ ယူကုန်ကြမှာကိုလည်း မမေ့အပ်ဘူးဗျ။ ကိုယ်မြှောက်ပေးနေတာထောက်ခံနေတာဟာ လမ်းလွဲမသွားဖို့လည်း လိုတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုက အခုဆန္ဒပြတဲ့ ရဟန်းတော်တွေကို မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်း ပြောချင်တာက အခု ဆရာတော်တွေဟောနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားတော်မှာ စစ်သားတွေ၊ ရဲသားတွေကိုပဲဟောပြောနေပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို စိုးစဉ်းမျှဖြောင်းဖြခြင်းမတွေ့သေးတာကို ထောက်ပြပေးစေချင်တယ်။ အဲ့ဒိတော့ကိုယ်တော်တို့ကို တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တယ်ဘုရာ့..... ကေအိုင်အေတို့ကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရေး တရားသွားဟောပေးပါလို့.... စစ်ဘီလူးတွေတောင် နားချဖို့ကြိုးစားရင် စစ်ဘီလူးမဟုတ်တဲ့ သူတို့ကိုလည်း တရားဟောပေးပါဦး.... စစ်ဆိုတာနှစ်ဖက်ရပ်မှ အပစ်ရပ်တာလေ... တစ်ဖက်တည်း ရပ်လို့မှ မရတာ....မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောင် ဆွေမျိုးတော်တွေ ဖြစ်မဲ့ စစ်မက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကို မီးမိုး ရေမိုးရွာပီး တန်းခိုး ပြဋိဟာ ပြ အကျွတ်တရားဟောသေးတယ်လေ......ဒီနေရာမှာ သာသနာ့ အာဇာနည်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ပြောပါရစေဦး။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ရှိပါ့။ ဒါပေမဲ့သာသနာ့အာဇာနည်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။ သာသနာတော်ပြန့်ပွားအောင်၊ သာသနာတော်သိက္ခာမညှိုးနွမ်းအောင်၊ သာသနာတော် အစော်ကားမခံရအောင် စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးစားစောင့်ရှောက်ကြတဲ့ ဆရာတော်မျိုးကို သာသနာ့အာဇာနည်လို့ ခေါ်တယ်ဗျ။ဥပမာအနေနဲ့ ပေးရရင် ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ရှင်ဥက္ကဌ၊မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး တို့ကို သာသနာ့ အာဇာနည်လို့ ခေါ်ဆိုသဗျ။ရဟန်းတော်ဘ၀ကနေ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့ဆရာတော် တွေကိုအာဇာနည်အရှင်သူမြတ်များလို့ ခေါ်တယ်ဗျ။ လောကီ အာဇာနည်နဲ့ လောကုတ္တရာအာဇာနည်ကို ရောထွေးလို့မရဘူးနော်။၀ိနည်းဆိုတာလည်း ရဟန်းတော်မှာ အများကြီးရှိတယ်။ သာသနာ့ဝန်ကိုထမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အများသူငါ လောကီလူသားတွေလို နေခြင်သလိုနေလို့မရအောင်၊ ကိုယ့်ကြောင့်၊ ကိုယ်ရုံထားတဲ့ သင်္ကန်းအရှိန်ကြောင့်စော်ကားမိတဲ့ သူတွေအပြစ်မဖြစ်အောင်၊ အကြည်ညိုမပျက်အောင်၊ သ့ဃာ့ဂိုဏ်းကွဲ၊ သင်းကွဲ မဖြစ်ရလေအောင်၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် သံဃာအဖွဲ့အစည်းမပျက်စီးရလေအောင် မြတ်စွာဘုရားက ရေရှည်အကျိုးကို မျှော်ကိုးပြီးချမှတ်ခဲ့တာပါ။ ရှေးယခင် ဘုရားအစဉ်အဆက်တောင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားလောက်သံဃာထုအပေါ်မှ ၀ိနည်းစည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်အခြားသော အနောက်တိုင်း ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ချီးကျူးရတာကတော့ရဟန်းကြီး ဂေါတမဟာ လက်နက် ကိရိယာ တန်ဆာပလာ တစ်ခုမှ မပါပဲနဲ့ယောက်ျားသားတွေကြီးရှိတဲ့ သံဃာဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကိုအုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာ အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ ၀ိနည်းဆိုတဲ့စည်းကမ်းနဲ့သိက္ခာပုဒ် အသွယ်သွယ်တွေကြောင့်ပါပဲ။ဒီနေရာမှာ ရဟန်းတွေဟာ စောင့်နိုင်သမျှ ၀ိနည်းကို စောင့်ထိမ်းချင်း၊ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ ဓုတင်ကို ဆောင်ခြင်းဟာ ရဟန်းကောင်း ရဟန်းမြတ်တို့ရဲ့ကျင့်ကြံနိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ မကျင့်ကြံလို့လည်း ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး။သို့သော် ၀ိနည်းဆိုတာ စောင့်ထိမ်းရမယ်မှန်း သိရဲ့သားနဲ့ ချိုးဖောက်ရင်သာသနာ့ဝန်ထမ်းလို့ မမည်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ပဇ္ဇင်းတက်တုန်းက ၀ိနည်းတွေလေ့လာနေတုန်းက မသိတာတွေ ဆရာတော်ကြီးကိုမေးလို့ ဆရာတော်ကြီးရှင်းပြဘူးတယ်။ငါ့တို့ ကျောင်းထိုင်ဆြတော်ကြီးက ပြောတယ် ဒီပဇ္ဇင်း ၀ိနည်းတွေ မေးလာရင်အကြောင်းထူး တစ်ခုခုတော့ ရှိပီကွ၊ ၀ိနည်းမေးတဲ့ ပဇ္ဇင်းဟာ ထွက်နည်းနှစ်နည်းပဲ ရှိတယ်။ လူထွက်ရင်ထွက် မထွက်ရင် တောထွက်တဲ့။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျင့်ကြံဖို့ရာ အဲ့လောက်ခက်ခဲတယ် ဆိုတဲ့အတွက်ပါ။သို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ၀ိနည်းကို သာသနာ့ဝန်ကိုထမ်းကြတဲ့ ရဟန်းတော်များဟာနိုင်သလောက်ကို ထမ်းကြပါတယ်။ တကယ့်ကို ရဟန်းအကျင့်ကို ကျင့်ကြံတဲ့ဆြတော်တွေဟာ လူပရိတ်သတ်များပြားစွာ ဖူးမြှော်ခြင်း၊ လာဘ်လာဘပေါများခြင်းကို ရဟန်းစခန်းစဉ် ပေါက်မြောက်ရန်အားထုတ်မှုမှာ မာန်နတ်ရဲ့အနှောင့်အယှက်တွေလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ (ရဟန္တာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများမှာကြည့်ပါ။)သာမာန်ပုထုဇဉ် လူပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အပြစ်တစ်ခုကို သိသိကြီးနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်ရင် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ကြသလဲ။ ဒီလိုဆိုရင် မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာ့နွယ်ဝင်ရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကို သိသိကြီးနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲ။ ဒါတွေကို သေခြာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။၂၀၀၃ မှာစင်္ကာပူ၊ ဂျာမနီကို ကျောင်းသား ဗီဇာနဲ့ သွားခဲ့၊ ဂျာမနီဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ခိုလှုံခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ဟာ မြတ်စွာဘုရား ချမှတ်ခဲ့တဲ့ သိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊၀ိနည်းနဲ့ သင့်တော်မတော်ကို ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သာသနာတော်ညှိုးနွမ်းမှာကို စောင့်ထိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်တဲ့ ရဟန်းတော်များဟာလည်းသာသနာ့အာဇာနည်ဆိုတာကို မမေ့သင့်ပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ရဟန်းတော်များ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်တယ် လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ အငြင်းမပွားလိုပါဘူး။ လုပ်လည်းဖြစ်တယ် မလုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ သို့သော်ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ် လုံရပါမယ်၊ သင်္ကန်းအရေခြုံပြီး ခုတုံးလုပ်စားတာတွေများလာမှာကို မလိုလားပါဘူး။ (အခုလက်ရှိ သင်္ကန်းကြီး တကားကားနဲ့ဘောပွဲကြည့် လက္ဘရည်ဆိုင်ထိုင်၊ အရက်သောက်၊ မိန်းမလိုက်စားပါရဇိကကံကြနေသော်လည်း သင်္ကန်းတန်းခိုးနဲ့ မိုက်လုံးကြီးနေတဲ့ရဟန်းမဟုတ်တော့သော လူများလည်းပါဝင်ပါတယ်)။ ရဟန်းအလုပ် ရဟန်းလုပ်ပြီးလူအလုပ် လူလုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ လူကနေ ရဟန်းအလုပ်လုပ်လို့ ဓမ္မာစရိယာဘွဲ့ရအဖြစ်က ထုတ်ပယ်လိုက်ရတာတွေ မမေ့သင့်ပါဘူး။ (ကြုံလို့အဲ့ဒိဓမ္မာစရိယာရဲ့ တပည့်သားသမီး မြေးမြစ်တွေဟာ ထေရ၀ါဒနဲ့ မဟာယန ကြားဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုကို ထူထောင်ဖို့ လုပ်နေတယ်ဆိုတာလေး ပြောလိုက်ပါရစေ။ ၂၀၀၇သံဃာအရေးအခင်းကြောင့် တရားဟောခွင့် ပိတ်ခံထားရပါတယ်လို့ ကြွေးကျော်နေတဲ့နာမည်ကြီး ဆရာတော်တစ်ပါးပါ အပါအ၀င်ပါ။) အဲ့ဒိတော့ ရဟန်းကလူအလုပ်လုပ်တာကို မကန့်ကွက်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ လှေနံနှစ်ဖက် နင်းလို့မရသလိုပဲရဟန်းက လူအလုပ် လုပ်လာရင် ရဟန်းလို ကိုးကွယ်ခံထိုက် မခံထိုက်ဆိုတာကိုတော့ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတယ်ဆိုခဲ့ရင် ရဟန်းတော်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးလုံးဝယူလို့မရတော့ဘူးဆိုတာ သိအောင်လို့တော့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရသည် သူတစ်ပါးအား ထိခိုက်ခြင်းအလျင်းမရှိပဲ မိမိ၏သဘောထားအား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည် ဆိုတာပါတဲ့အတွက် ကျွန်တော့အယူအဆကိုရှင်းပြပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်၊အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ဝေဖန်နိုင်ကြပါတယ်။ ငါ့အယူမထောက်ခံလို့ရန်သူဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းအာဏာရှင်စာရင်းဝင်သွားပီဆိုတာ မမေ့လိုက်ပါနဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။by James Mmtဟုတ်ကဲ့......သတင်းကို သတင်းအဖြစ်ပဲ မှက်ယူပါတယ်....ဒါပေမဲ့ဝေဖန်ချက်တော့ပေးချင်တယ်ဗျ....သံဃာတော်တွေနိုင်ငံရေးထဲကိုဝင်ပြီးလုပ်ခဲ့လို့ ဘယ်နှစ်ခါများအောင်မြင်ခဲ့ဖူးပါလဲ(88နောက်ပိုင်းကိုပြောပါတယ်)....ရွှေဝါရောင်တုန်းကလည်းသံဃာတော်တွေစပြီးလုပ်ခဲ့တယ်... ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ...သံဃာတော်တွေသွေးမြေကျ/ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတယ်...ဝင်ပါတဲ့ပြည်သူတွေလည်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်....မနှိမ်နင်းချင်ပဲ နှိမ်နင်းခဲ့ရတဲ့ အချို့သော စစ်သားတွေ (အားလုံးမဆိုလိုပါ) လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်...ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ရလဒ်ကဘာလဲ....ဟုတ်ကဲ့သုညပါ.....ဒါကြောင့် သံဃာတော်တွေနိုင်ငံရေးဝင်ပါတာအားမပေးပါဘူးခင်မျာ....ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ အားတက်သရော(ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်)လုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပါ...သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီ/အားပေးရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...သူတို့ကိုယ်ချည်းမှီခိုမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါ....ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဝင်ပြောလို့ဆန္ဒပြလို့လည်း ဒီအစိုးရကလက်ခံမယ်ထင်ပါသလား....လုံးဝမထင်ပါဘူး...သူတို့မှာလည်း သူတို့အစီအစဉ်ရှိပြီးသားဆိုတာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ....ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ဝေဖန်ရရင်သံဃာတော်တော် ဆန္ဒပြတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်မခံနိုင်ပါခင်ဗျာ.....(အရေးအသားမတတ်ရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်)by myo myint Aungထပ်ဖြည့်ပြောချင်ပါတယ် ( ၂၀၀၇ အရေးအခင်း ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရလဒ်ကဘာလဲ....ဟုတ်ကဲ့ သုညပါ..)ဆိုတာကိုပါ ။ သုညတင်မက အနုတ်ပါပြခဲ့ပါတယ် ။ကမ္ဘာ့ အလယ် ဘာသာခြားတွေအလယ်မှာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အဆင့် ထိုးကျပါတယ် ။ထေရ၀ါဒ ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံက သံဃာတွေဟာလဲ နိုင်ငံရေးကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က ၀င်လုပ်တတ်တဲ့ တိဗက်က မဟာယာန ဒလိုင်လားမားလိုဘုန်းကြီးတွေပါပဲလား ဆိုတဲ့ အမြင်ပါ ။ သူတို့က နားမလည်တော့ကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ် ။ နိုဗယ်ဆုတောင်ပေးချင်ပေးမယ် ။ ဒါပေမဲ့ ထေရ၀ါဒ ဘက်ကသိပ်ကို နာပါတယ် ။နောက်တစ်ချက်က နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ် သိပ်ကို ထိခိုက်ပါတယ် ။မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ သာသနာအရောင်ညှိုးနွမ်းတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်အရှက်ဗျန်းဗျန်းကွဲပါတယ် ။ အစိုးရကိုထိတာထက် နိုင်ငံရဲ့ အင်းမေ့ခ်ျ ကိုမျိုးဆက်နဲ့ချီပြီး ထိပါတယ် ။ သိပ်ကိုနာပါတယ် ။လက်ရှိမှာလဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ သံဃာတွေနဲ့ မင်းအစိုးရဒယကာတွေကြား ဆရာဒကာဆက်ဆံရေးမှာ မယုံသင်္ကာတွေ ။ အကန့်အသတ် အဖိအနှိပ်တွေပိုများပြီး သာသနာတော်လူလုံးမလှဖြစ်ကာ ဘာသာခြားတွေ ၀မ်းမြောက်တာကလွဲလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးရော။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူရော ။ နိုင်ငံရော။ အစိုးရရောဘာကောင်းကျိုးမှ မရလိုက်တဲ့အပြင် အရှုံးပေါ်ပါတယ် ။ ဘေးတီးပေးကြတဲ့ဘီဘီစီလို ပြည်ပက လေသမား ဒေါ်လာစားတွေဘဲ ကြားထဲက ကောင်းစားပြီးလုပ်ကွက်ရသွားတာပါ ။ စဉ်းစားချင့်ချိန်တော်မူကြပါ မိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့။by PaoPao Myanmar Express
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသင့်သော အမျိုး ဘာသာ သာသနာ (ပေးစာ - ၄၉)
တိုင်းရင်းသား ဆိုသည်မှာဟု ဖွင့်ရမလား..တိုင်းရေးသား လက္ခဏာများဟု ဆိုရမလား.. လူမျိုးတစ်မျိုးသည် မိမိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့၊ ထုံးတမ်းအစဉ်လာ များကို မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားပြီး အသက်နှင့်ယှဉ်၍ ကာကွယ်ရသည်၊ ထိန်းသိမ်းရသည်ဟု သိရ၏ ။ ယုတ်စွအဆုံး မွန်လူမျိုး ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်က ကရင်လူမျိုး မိန်းကလေး တစ်ယောက်နှင့် အာဝါဟ ၀ိဝါဟ သဘောတရားဖြင့် လက်ထပ် ပေါင်းသင်းနေသည်ကိုပင် ပတ်သက်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းများကမူ ထိုသူတို့အား အမျိုးကို သစ္စာဖောက်သူ၊ အမျိုးအနွယ်ကို မစောင့်ရှောက်သူဟု ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြသည်။ ထို့အတူ အမျိုးနွယ်စုသည် မိမိတို့ မျိုးနွယ် တိမ်ကော ပပျောက်သော ရန်မှ ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ အ၀န်းအ၀ိုင်းအတွင်းသို့ တခြားမျိုးနွယ်များ စိပ့်ဝင် ပြန်နှံလာသည်ကို မလိုလားပေ။ ထိုကဲ့သို့သော အပြုအမူများကို လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် အမျိုးကို စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်၏။ အချုပ်အခြာကို စောင့်သိရာ ရောက်၏။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံ အကြားရခိုင်ဒေသတွင် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှရိုဟင်ဂျာဟု ခေါ်ဝေါ်နေသော လူမျိုးများနှင့်အတူ ရောနှေ နေထိုင်ကြသည်မှာ မည်သူမှ မငြင်းနိုင်ပေ၊ သို့သော် နှစ်ပေါင်းများစွာမှ နေထိုင်လာသော သူများမဟုတ်ပဲ၊ ရွေပြောင်းလာသောသူများအား တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာဟု သတ်မှတ် ပေးရမည်လား။ လူသာလာပါ ဧည့်သည် မခေါ်လာပါနှင့် ဆိုသလို၊ အခုအနေအထားက လူရော ဧည်သည်ပါ နိုင်ငံအတွင်း မူရင်းဌာနေ တိုင်းရေးသားတခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရမည်ဟု တဖက်သတ် အော်နေသည်ကို လက်မခံနိုင်ပေ၊ တကယ်လို့ မိမိလူမျိုးအား တိုင်းရေးသား အဆင့်အတန်း ရရှိစေလိုလျှင် ထိုအဆင့်အတန်းနှင့် တန်သော အမျိုးနွယ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဂုဏ်ကို စောင့်သိရမှသာလျှင် တိုင်းရင်းသား အဆင့်အတန်းတခုကို ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ပထမ ဖယောင်းတိုင်တွင် တောက်လောင်နေသည့် မီးတောက်သည် ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်သို့ ကူးပြောင်း ထွန်းညှိလိုက်သော် ထိုမီးတောက်အား ပထမ မီးတောက်ကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည် ဟု မထင်ပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဖက်ဒေသတွင် ရှိသော ရိုဟင်ဂျာများကို တချို့သော သူများ ထောက်ပြသည်က သူတို့သည် နှစ်ပေါင်း များစွာအတွင်းက နေထိုင်လာခဲ့သော သူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဦးနု အစိုးရသည်လည်း ဒီလူမျိုးများအပေါ် မူရင်းဌာနေ တိုင်းရေးသား အဆင့်အတန်းထက် မနိပ်သော အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည့် အဆိုပြုချက်ကိုလည်း လက်ခံ၏။ ကျွန်ုပ် အစွန်းမရောက်ပါ။ သို့သော် နှစ်နိုင်ငံ အကြားဒေသများ အနေအထားကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်သည့် အခြေအနေများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါစို့ နှစ်ပေါင်းများစွာက နေထိုင်ခဲ့ကြသော လူများအား နိုင်ငံသား ထုတ်ပေးခဲ့သည်ကို ထောက်ခံ၏။ သို့သော် နောက်ထပ် ထိုဒေသသို့ ရွေ့ပြောင်း ၀င်ရောက် လာသောသူကို မြန်မာနိုင်ငံသားဟု ခေါ်ဆိုရမည်လား၊ ရောထွေးလိုက်ပါနဲ့၊ ခွဲခွဲခြားခြား မြင်စေချင်လို့ပါ။ အစွန်းတဖက်ကိုရပ်ပြီး လိုရာ ဆွဲပြောလာရင်တော့ ၀မ်းနည်းရပါ၏။ စစ်အစိုးရနှင့် သဘောထားချင်း နည်းနည်းဆင်သဖြင့် စစ်အစိုးရ အားပေးသည်ဟု မထင်မှတ်လိုက်ပါနဲ့။ သေသည့်တိုင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်မခံပါ။ မှန်ကန်တဲ့ သဘောတရားတခုကို ချပြသည့် ဆန္ဒသဘောထားမှလွဲ၍ ဘာမှ မရှိပါ။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့ မိမိယုံကြည်သည့် ဘာသာတရားကို ကာကွယ်ခြင်း ဖြင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသော အမျိုးဘာသာကို ကာကွယ်သော သဘောထားဖြင့် မှန်ကန်သည်ဟု ထင်သော အနေအထားတခုကို တင်ပြချက်တခုသာ ဖြစ်သည်။ အခုတလော ရိုဟင်ဂျာတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုမျိုးနွယ်စုအား တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံခြင်းနှင့် လက်မခံခြင်းကို အွန်လိုင်း စာမျက်နှာများတွင် သဘောထား နှစ်မျိုး ကွဲလွဲနေသည်ကို တွေ့ရ၏။ လက်ခံသည့် သူများက ပါလီမာန် လက်ထက်က ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုအတွက် လွတ်တော်အမတ်များ ထားရှိခြင်း၊ မြန်မာ့အသံက ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာ ထုတ်လွှင်ပေးခြင်း၊ ရှေးမြန်မာ ဘုရင်များထံ အမှုတော် ထမ်းရွက်ခြင်း စသော စသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် တိုင်းရင်းသားဟု ထောက်ခံ ပြောဆိုနေသည်။ ဒီနေရာမှာ တခုထောက်ပြချင်သည်။ နိုင်ငံတခုအတွင်းမှ တိုင်းရင်းသားဟု ခံယူထားသော လူမျိုးအနွယ်စုသည် မိမိနှင့် အုပ်ချုပ်သူများ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနေလျက်ပင်မူ အမျိုးနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုသော နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းသို့ တခြားခြားသော လူမျိုးများအား စိပ့်ဝင်ပျံနှံခြင်း၊ လူမျိုးရေး ရောထွေးခြင်းများ မဖြစ်ခံခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ကြသည်။ ဤသို့သော အပြုအမူသည် နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြကုန်သော မူရင်းဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်းပေး တာဝန်တရပ်ဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှသာလျှင် အချုပ်အခြာကို စောင့်သိခြင်း ဂုဏ်မြောက်မည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ထိုဒေသအတွင်း လူဦးရေ ၁၀၀၀၀ ရှိသည် ဆိုပါစို့၊ ထိုဒေသအတွင်းရှိ လူများသည် ရှေးမြန်မာ ဘုရင်များထံတွင် အမှုထမ်းခဲ့သူများ၊ ဦးနု အစိုးရ လက်ထက်က နိုင်ငံသားလက်မှတ် ထုတ်ပေးခဲ့သော သူများ အားလုံးတော့ မဟုတ်တန်ရာ၊ ဦးနေ၀င်း အစိုးရ လက်ထက်ကလည်း စိပ့်ဝင်ပျံနှံမှုများ ရှိခဲ့သောကြောင့် ဒုတိယကမ္ဘာ့စစ် နောက်ပိုင်း ရောက်ရှိလာသော သူများကို နိုင်ငံသား ခံယူခွင့် မပေးခဲ့ပါဟု ဖတ်မှတ်ဖူးသည်။ “ ၁၈၂၄ ခုနှစ်၊ ပထမ မြန်မာ အင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲအပြီးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခိုင်တိုင်း သတ်မှတ်၍ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီအတွင်းသို့ သွတ်သွင်းခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်စဉ် မှတ်တမ်းများအရ ၁၈၂၄ မှ ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရသည့်အချိန်အထိ အင်္ဂလိပ် မှတ်တမ်းတွင်များတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု အသုံးအနှုန်း မတွေ့ရပေ၊ နောက်ပြီး စစ်တွေခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အရေးပိုင်မင်း မှတ်တမ်းများအရ ဒီဒေသရှိ လူမျိုးများကို စစ်တကောင်းလူမျိုး ( စစ်တကောင်းနီးရန်း ) ဟုသာ ဖေါ်ပြသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု တခွန်းမှ ညွှန်းဆို မသွားသည့်အတွက် ကိုလိုနီခေတ်တွင် မရှိ၊ ထို့ကြောင့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြောရလျှင် ကိုလိုနီခေတ်၌ မရှိဘူး၊ မရှိခဲ့ဘူး။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေအရ ၁၈၂၃ခုနှစ် မတိုင်မှီက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သော လူမျိုးစုများကိုသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဟု သတ်မှတ်သည်ဟု ဥပဒေရှိနေပါသည်။ ဦးနု မိန့်ခွန်းများ၌ တိုင်းရင်းသားဟု ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ် မူဂျာဟစ် သူပုန်များ လက်နက်ချသည့် အခမ်းအနား၌ ဦးဗဆွေ ဗိုလ်အောင်ကြီး မိန့်ခွန်းများတွင်လည်း နယ်စပ်မြစ်ဖြစ်သော နတ်မြစ်၏ ဟိုတဖက်ကမ်း အရှေ့ ပါကစ္စတန် ( ယခု ဘင်္ဂလားဒေရှ် )အတွင်း လူမျိုးများသည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဘာသာ စကားတူသော လူများ နေထိုင်ကြသည် ဖြစ်သဖြင့် အတူတူဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားဟု အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်ကို မတွေ့ခဲ့ကြောင်း ” သမိုင်း ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးအေးချမ်းက ၆ ရက်နေ့၊ ဘီဘီစီ၏ မြန်မာ့အရေး၊ ကမ္ဘာ့အရေးကဏ္ဍတွင် သမိုင်းစာအုပ်များ ကိုးကားပြီး အမှန်ကို ထောက်ပြခဲ့သည်။ အင်ဒိုချိုင်းနားဟု ခေါ်ဆိုသည့် ဒေသအစအတွင်းသို့ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာက လူမျိုးစုအနွယ်များသည် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာဆိုသလို မျိုးနွယ်အလိုက် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့သည်၊ ထိုကဲ့သို အတိုင်းအတာတခုအထိ ကျယ်ဝန်းလှသော ဒေသအတွင်း လူမျိုးတမျိုးနှင့် တမျိုးဟာ မိမိတို့အမျိုးအနွယ် အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ သူတပါး နယ်မြေများကို ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ပြီး သြဇာအာဏာ တည်ဆောက်ကြသည်။ ဥပမာ။ ။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံ ထူထောင်ခြင်း၊ ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံထူထောင်ခြင်း။ မွန်လူမျိုးများ ကြီးစိုးသောခေတ်၊ ရှမ်းလူမျိုးများ ကြီးစိုးသည့် ခေတ်။ထိုကာလများ၌ နယ်နမိတ် အကျယ်အ၀န်း အမြောက်အမြားကို ပိုင်ဆိုင်သော လူမျိုးနွယ်တို့၏ စစ်တပ်တွင် ၎င်းလူမျိုး တမျိုးတည်းသာ ရှိခြင်း မဟုတ်ပါ၊ သုံပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးလာသော လူမျိုးခြားများ၊ လက်ဆောင် ပဏ္ဍာဆက် သစ္စာခံ လူမျိုးစုမှ ဆင့်ခေါ်ထားသည့် စစ်သားများ၊ တိုင်းပြည် သြဇာကြီးထွားလာပြီး စီးပွားရေး ချောင်လည်လာသောကြောင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ၀င်ရောက်ခဲ့သည့် တစ်ပါးသော လူမျိုးများတို့သည့် အင်ပါယာ ဘုရင့်တပ်များတွင် အမှုထမ်း ခဲ့ကြသည်။ ထို မျိုးနွယ်စု၏ ခေါင်းဆောင် သို့မဟုတ် ဘုရင်တစ်ပါးသည် တစ်ပါးသောရပ်မှ အနွယ်အစုများအား ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွင် သွတ်သွင်းခြင်းဖြင့် ဘုန်းလက်ရုံး တိုးသည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်ကလည်း လူအင်းအားဖြင့် စစ်တိုက်ရသဖြင့် လူသူလေးပါး စုဆောင်း လက်ခံမည်မှာ မလွဲပေ၊ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း အချို့နေရာများတွင် ဘုရင်ဂျီဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။နောက်ပြီး ရှမ်းပြည်ဒေသတွင်ရှိသော အင်းလေးဒေသ၌ အင်းသားတို့သည် မြန်မာပြည် တောင်ပိုင်းဒေသဖက်က လူမျိုးနှင့် ဓလေ့ တချို့ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအင်းသားများသည် မိမိတို့၏ အမျိုးအနွယ်အတွင်းသို့ လူမျိုးများပြားလှသည့် ရှမ်းဒေသမှ လူမျိုးများ၏ ဓလေ့ ထုံးထမ်းများ မ၀င်ရောက်နိုင်အောင် တစ်မျိုး၊ လူမျိုးတစ်မျိုး၏ ရောနှောခြင်းရန်မှ ကာကွယ်မှုဖြင့် တစ်ဖုံ၊ အမျိုးဂုဏ်ကို ယခုအထိ စောင့်ရှောက်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဒေသတခုအတွင်းသို့ တစ်ပါးသော လူမျိုးများ ၀င်ရောက်လာ အခြေချလာပုံကို ပဒေသရာဇ်ခေတ်၏ အားနည်းချက်တစ်ခုအရ ထောက်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ဖက် နယ်စပ်တစ်ကျောတွင် အချို့သော မွန် ကရင် လူမျိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာက နေထိုင်လာခဲ့သောကြောင့် ထိုလူမျိုးအနွယ်များကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ထိုင်းနိုင်ငံသားနှင့် အဆင့်အတန်းတူသည့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူခွင့်ပေးခြင်း၊ တောင်ပေါ်သား ( ဒုတိယနိုင်ငံသား အဆင့်အတန်း ) လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူလိုက်သောသူသည် ထိုင်းလူမျိုးကဲ့သို့ ထိုင်းဘုရင်မင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အချုပ်အခြာကို သစ္စာကို စောင့်သိမှသာလျှင် နိုင်ငံသား အဆင့်အတန်းနှင့် ညီမျှသည်။ နှစ်အနည်းငယ် ကြာလာသောအခါ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံထက် စီးပွားရေး တိုးတက် ချောင်လည်လာသဖြင့် မြန်မာပြည်ဖက်မှ တိုင်းရင်းသားများ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ တစစ ပျံနှံနေထိုင်လာသည်ကို ထိုင်းအစိုးရအနေ့ဖြင့် ထိုသူများအား နှစ်ပေါင်းများစွာက နေထိုင်ခဲ့သူများနှင့် တစ်တန်းစားတည်း မသတ်မှတ်ခဲ့ပေ၊ တချို့ အဆက်အသွယ် ကောင်းမွန်သော သူများသာလျှင် တောင်ပေါ်သားကတ် ကိုင်ဆောင်ခွင့်သာ ခံစားခွင့် ရရှိသည်။ ( ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်အနွယ်များ ဧည်နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ရသကဲ့သို့ )၊ သို့ပေမယ့် ထိုသူများသည် ဘန်ကောက်ကဲ့သို့သော အရပ်ဒေသများတွင် နေထိုင်ခွင့်မရပါ၊ တွေ့ရှိပါက ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရသည်။ ထို့ကဲ့သို သတ်မှတ်ခြင်း ခံလိုက်ရသောသူသည်လည်း ထိုင်းစကားနှင့် ထိုင်းစာကို တတ်မြောက်ခြင်းနှင့် ထိုင်းလူမျိုး အာဏာပိုင် တစ်ယောက်က ထောက်ခံချက် ပေးမှသာ ဒုတိယနိုင်ငံသား အခွင့်အရေးရှိသော တောင်ပေါ်သားလက်မှတ်ကို ရရှိခံစားနိုင်သည်။ စီးပွားရေးအရ ရွေ့ပြောင်း နေထိုင်သောသူများကို နိုင်ငံသား ခံယူပိုင်ခွင့် လုံးဝ မရရှိကြပါ၊ ထိုထက်အဆင့်နိပ်သော အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်ကိုသာ ရရှိသည်။ ထို့အပြင် ထိုလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအား ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကလေးမွေးဖွားခွင့်ကို တင်းကြပ် ထားသည်။ ထိုင်း အခြေခံဥပဒေအရ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မွေးဖွားခဲ့သော ကလေးအား နိုင်ငံသားအဖြစ် ရယူခွင့်ရှိသော ဥပဒေက ရှိနေသောကြောင့် အလုပ်သမားလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မွေးဖွားခွင့် မရရှိပဲ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ခြင်း ခံရတတ်သည်။ ဤသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားသားများအပေါ် ထားရှိသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မူဝါဒ တခုဖြစ်သည်။ ထို့နည်းအတူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့် အခြေချနေထိုင်သော သူတစ်ယောက်သည် နိုင်ငံသားအဆင့် မဟုတ်သော အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ကို အချိန်ကာလတခု စောင့်ဆိုင်းပြီးမှသာလျှင် လျှောက်ခွင့် ရရှိသည်။ ထိုအမျိုးစားကို ဂရင်းကဒ် (Green Card) ဟု ခေါ်သည်။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် ကံစမ်းမဲ ပေါက်ပြီး ရောက်ရှိလာသောသူကို ထိုကဒ်ကို ရောက်ရောက်ခြင်း ကိုင်ခွင့်ပေးသည်။ ဂရင်းကဒ်ကို ဆောင်ခွင့်ရလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထိုသူအား နိုင်ငံသားဟု မသတ်မှတ်သေးပေ၊ နိုင်ငံအတွင်း အခြေချ နေထိုင်ခွင့်ဟူသော တရားဝင် နေထိုင်ခွင့်မျှသာ ခံစားခွင့် ရှိသည်။ နိုင်ငံသားများနှင့် တန်းရည်တူသည့် အခွင့်အရေး ဥပဒေများ အကျိုးမခံစားရပေ၊ ငါသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟု ပြောခွင့်မရပါ။ထိုနေထိုင်ခွင့် ရရှိသောသူသည် တခြားနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွေ့ခွင့် မရရှိပေ၊ အကယ်၍ နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်း နေထိုင်ခွင့်ရသော တစုံတစ်ယောက် (သို့) အစုအဖွဲ့တစ်ခုသည် တစ်ခြားနိုင်ငံသို့ (သွား) တရားဝမင် ၀င်ရောက်ခဲ့သော် လူဝင်မှု ဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် ဆောင်ရွက် အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။ ထိုအပြစ်မှုကြောင့် လက်ခံထားသည့် နိုင်ငံကလည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို လုံးဝ ပေးမည်မဟုတ်၊ နိုင်ငံတခုအတွင်းသို့ အလည်အပတ် သွားလျှင်တောင်မှ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးများသို့ ဗီဇာလျှောက်ရပြီး သူတို့ ခွင့်ပြုမှ ထိုနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက် လည်ပတ်ခွင့်ရသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံအများအပြားတွင်လည်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်သည့် အခြေအနေအား ဤသို့ ဤပုံ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်မှာ နိုင်ငံတကာ မူတခုအနေဖြင့် ကမ္ဘာက လက်ခံနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ နောက်တစ်ခုက သီရီလင်္ကာတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲသည်လည်း နိုင်ငံရေး ပြဿနာထက် အမျိုး သာသာ သာသနာက ရှေ့တန်းက ရှိနေတဲ့ ပြသာနာပါ၊ အိန္ဒိယ တောင်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သော ဘာသာခြား တမီးလ်ပြည်နယ်ကြီးကို ကျောထောက် နောက်ခံပြုပြီး သီရီလင်္ကာအတွင်းရှိ တမီးလ်လူမျိုးများက တိုင်းပြည်တောင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်၏။ ထိုသည်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကြောင့်ဟု ဆိုရပေမည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်းနေ သီရီလင်္ကာလူမျိုးအနေဖြင့်လည်း ကုန်းမကြီးမှ လူမျိုးကြီးတစ်ခု ၀ါးမြှိုသည့် ရန်မှ ကာကွယ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်၏။ ကမ္ဘာတွင် ထေရ၀ါဒ လက်ခံသည့် နိုင်ငံကို လက်ချိုး ရေတွက်လို့ရသည့် အနေအထားတခု ဖြစ်နေသည်၊ သင်သည် ကမ္ဘာ့ မြေပုံတချပ်ကို စိတ်ထဲ အာရုံသွင်းလိုက်ပါ၊ ထေရ၀ါဒ ကိုးကွယ်နေသော နိုင်ငံ နယ်နမိတ်ကို စိတ်ကူးဖြင့် ကြည့်လိုက်ပါ မြင်နိုင်၏။ တတ်နိုင်သည့်ဖက်က ကာကွယ်ပြောဆို ပါရစေ၊ အခုလို ထိုင်းအစိုးရ အနေဖြင့် လက်မခံလိုက်သည်ကလည်း ထိုပြသာနာက ထိပ်က ပါဝင်နေသည်ဟု ထင်မြင်ပါ၏။ ထိန်းသိမ်းခွင့်ပေးပါ၊ အေးချမ်းစွာဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ဘာသာတရားတခုဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် မပျောက်ကွယ်လိုသည့် ဆန္ဒသည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ပါးသော ဘာသာတရားများကို စည်းရုံး သိမ်းသွင်းခြင်း တိုက်ဖျက်ခြင်း ပုတ်ခတ်ခြင်းမရှိသော အေးမြလှသည့် ထိုဘာသာတရားလေးကို ကိုးကွယ် ရှင်သန်ခွင့်ပြုပါ၊ ဤ ရိုဟင်ဂျာ ပြသာနာသည် ၀ါးမြှိုခြင်းဆန်သည့် အပြုအမှုတခု ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်၏၊ လတ်တလော အနေအထားကို ထောက်ရှု့ ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ လာလတ္တံသည့်အချိန်ကာလများတွင် ကြီးမားသော အကျိုးအဆက်ကို တွေးမြင်မိ၏။မြန်မာ၊ လော၊ သီရီလင်္ကာ၊ ကမ်ပူးချားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများတွင်သာ တွေ့မြင်နေရသည့် ထေရ၀ါဒ နေရာကလေးသည် ကမ္ဘာ့မြေပြင်နှင့် ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ကွင်းကွင်းလေးသာ ကျန်နေတော့သည်။ နောင်တွင် ထေရ၀ါဒ ရှေ့တန်း အမာခံနိုင်ငံများဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သီရီလင်္ကာနိုင်ငံများတွင် ထိုပြသာနာသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သော ပဋိပက္ခများဖြင့် ကြုံဆုံရမည် မလွဲပါ။ ထို့ကြောင့် သတိပြု စောင့်ရှောက်ခွင့်ပေးပါ၊လူမျိုးကြီး တမျိုးသည် လူမျိုးငယ်များအပေါ်တွင် ထားရှိသည့် သဘောထား အပြုအမူကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ ဘာသာကြီးဖြစ်သော ဘာသာတခုက ၀င်ရောက် ထိုးဖေါက်နေသလို ခံစားမိပါသည်။ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတခုအား ဖေါ်ဆောင်လိုသည့် အနေအထားဖြင့် ရေးသားခြင်း မဟုတ်ရပါကြောင်း ကြိုတင် တောင်းပန်ပါရစေ။ မိမိကံကြမ္မာ မိမိဖန်တီးခွင့်ဆိုသော ဘောင်အတွင်းမှ မိမိ သဘောထား အမြင်ကို ထင်သာ မြင်သာ ဖြစ်စေလိုသည့် စိတ်စေတနာတခုပါ။ တခါတရံတွင် လူမျိုးကြီးတမျိုးမှ ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေးအမြင်ရှိသည့် လူတယောက်က တိုင်းရေးသားများကို ဒုတိယ နိုင်ငံသား အဆင့်တန်းလောက်သာ သဘောထားရှိသလို၊ အာဏာရှိသူများသည် သူတို့ကပဲ ပြည်ပနှင့် ဆက်ဆံခွင့်အထူးကို ရနေသကဲ့သို့ အတိုက်အခံများကို ပြည်ပအားကိုးဆိုပြီး ဆောင်ပုဒ်မျိုးဖြင့် ထိုးနှစ်တိုက်ခိုက်သလို၊ အခုလည်း အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ကာကွယ် ရေးသားနေသောသူများကို ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတခု ဖန်တီးနေရောင်ရောင် တရားခံရှာ ရေးသားနေသည်မှာ စိတ်ပျက်စွာ တွေ့မြင်နေရသည်။ ပြသာနာကို အစပျိုးလာသူက မည်သူဖြစ်သနည်း.. ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးကို မည်သူက စတင် ချိုးဖောက်လာသနည်း.. ထို့ကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာအား နောက်လာမည့် မိမိ၏ မျိုးဆက်များကို ထိတွေ့စေချင်လိုသောကြောင့် မေးလိုက်ပါရစေ.. ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် မပေးတော့ဘူးလား.. လူလ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ…
သို့NCGUB မှ ၀န်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်နှင့် ဦးဟန်ညောင်ဝေ သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာသမိုင်းစဉ်လာတလျှောက် လေ့လာဆန်းစစ်လျှင် ရခိုင်တို့၏သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် “ရိုဟင်ဂျာ” လူမျိုးဟူသော အသုံးအနှုံးဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့မှု စိုးစဉ်မျှမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့၏မူရင်းဒေသဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလား ဒေခ်ျ့နိုင်ငံ သမိုင်းတွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ မတွေ့ရှိရပေ။ နောက်ထပ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခုဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သမိုင်းတွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ မတွေ့ရှိရသည့်အပြင်။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင်ရော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ ရှိခဲ့ပါသလား။ D.G.E. Hall ၏ A History of South-East Asia စာအုပ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူသော ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းကို တလုံးတပါဒမျှ မတွေ့ရှိရပေ။ထို့အပြင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုလိုနီပြုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်တို့၏ အလွန်တိကျသော ဂေဇက် မှတ်တမ်းများတွင် ယင်းအမည် ထည့်သွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း အလျဉ်းမရှိပါ။ ဗြိတိသျှဂေဇက်တီယာ Gazetteers မှတ်တမ်းများတွင် Arakanese Muslim ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင် ပါရှိသူများသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မှလွဲ၍ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ဘာသာစကားတို့၌ ရခိုင်လူမျိုးနှင့် တူညီကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ရခိုင်မင်းများ လက်ထက်ကပင် ဒေသတွင်းအပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးများကြောင့် ရခိုင်ဒေသသို့ ရောက်ရှိအခြေစိုက် နေထိုင် ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြသဖြင့် နေထိုင်မှုသက်တမ်း ကြာရှည်လာသည်နှင့်အမျှ ဘင်္ဂလီဘာသာစကား ပြောဆိုခြင်း အလျဉ်းမရှိသော ရခိုင်ဒေသတွင် ၄င်းတို့သည်လည်း ဘင်္ဂလီစဘာသာစကား လုံးဝမပြောတတ်ကြပေ။မြန်မာပြည်အတွင်း၌ နေထိုင်ကြသည့် မွတ်ဆလင်လူမျိုးများသည်လည်း ရိုဟင်ဂျာဟူသော ဝေါဟာ ရကို ကြားတောင် ကြားဖူးကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘာသာရေးအစွမ်းရောက် လူတစ်စုမှ (၇၈၆)ဂဏန်း နှင့်အညီ ၂၁ ရာစုအတွင်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်း၌ အစ္စလန်ဘာသာ လွမ်းမိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လာရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အချို့မှ၊ သူတို့သည် လွန်ခဲသော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြသည့် ”နီပွန်းဂျာ“(Nippongya) တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းလိမ်ကိုဖန်တီး၍ အစ္စလမ်နိုင်ငံသစ်တစ်ခု ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ဘင်္ဂလားအော်လှိုင်းသံ အမှတ်(၂)။ ထိုနည်းတူ မကြာမှီအချိန်တွင်လည်း ဗမာရိုဟင်ဂျာ၊ ကရင်ရိုဟင်ဂျာ၊ ရှမ်းရိုဟင်ဂျာ၊ မွန်ရိုဟင်ဂျာ၊ ချင်းရိုဟင်ဂျာ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေသည်။၁၉၅၉-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဦးနု ရခိုင်ပြည်သို့ မဲဆွယ်ရန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ မောင်တောမြို့ နယ်၌ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတရားဟောပြောခဲ့စဉ်က ”သန့်ရှင်းသာ အနိုင်ရခဲ့ရင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလို့ သတ်မှတ် ပေးမယ် မြန်မာ့အသံက တိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာဘာသာနဲ့ အသံလွင့်ပေးမယ်လို့“ ဂတိပေးခဲ့သည်။ အမတ်နေရာ သုံးနေရာ ရရန်အတွက် အာဏာရူးခဲ့သည့် ဦးနုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် နာမည် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကျီးကန်းငှက် ညောင်သီးကိုစား၍ တိုက်နံရံမှာ ချီးယိုခြင်းသည် လောလောဆယ်၌ အရေးမကြီးဟု ထင်ရ၏။ သို့သော် ညောင်ပင်ကြီးလာမှ ပြသနာတက်ရခြင်းမျိုး ကျနော်တို့ ကြုံနေရသည်။ အများစုက အဆောက်အဦး မပျက်စီးရန် ညောင်ပင်အား ခုတ်လှဲချင်သော်လည်း တချို့က ညောင်ပင်၏ ထည်ဝါမှုနှင့် အရိပ်အာဝါသကို အပျက်အစီး မခံနိုင်ဖြစ်နေကြရသည်။”ရိုဟင်ဂျာ“လူမျိုးဟူ၍ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလာအောင် အမျိုးမျိုးကြိုးစားအတည်ပြုနေ ကြသူတို့သည် သူတို့၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အမြတ်ထုတ်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် ဟန်ညောင်ဝေ နှင့် NCGUB မှ နိုင်ငံရေးလုပ်စားနေသူ ဦးဘိုလှတင့် လည်းပါဝင်သည်။ ထိုဟန်ယောင်ဝေနှင့် အပေါင်းပါတစ် စုတို့သည် မြန်မာပြည်သူကို အကြောင်းပြုပြီး နိုင်ငံတကာမှ ငွေကြေးများတောင်းခံ၍ လုပ်စားလာကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ စစ်အစိုးရ ကိုဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင် ချက်ဟူ၍ မယ်မယ်ရရ တစိုးတစဉ်းမျှ မတွေ့ရှိရသည့် အတွက်တာကြောင့် မြန်မာဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး အတွက် ထောက်ပံ့နေကြသည့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များမှ ယခုအခါ ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ဖြစ်ကြာင်းသိရှိရသည်။ NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်း နိုင်ငံတကာမှ နှစ်ပေါင်း၂၀ဆယ်ကျော် ထောက်ပံ့ခဲ့ သော်လည်း မည်မည်ရရ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဟူ၍ လက်ဆုတ်လက်ကိုင် မပြနိုင်သဖြင့် ယခုအခါ၌ ထောက်ပံ့ ကြေးငွေများ ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီများကလည်း ဘူးသီးတောင် မောင်တော နယ်မြေကို ”အာကစ္စတန်နိုင်ငံ“ ထူထောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာရှိ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများမှ အလှူငွေများကောက်ခံသည်။ ထိုသို့ အလှူခံ၍ ရရှိလာသည့် ငွေကြေးများကို ဦးဟန်ညောင်ဝေလက်ထဲသို့ ပုံအပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ကောင်စီတွင် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခိုင်း နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမျှနှင့် မရောင့် ရဲနိုင်သေးသည့် ဦးဟန်ညောင်ဝေသည် မျောက်ပြ၍ ဆန်တောင်းသည့်နှယ်၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတို့ကို အကြောင်း ပြု၍ အာရပ်နိုင်ငံများမှလည်း ငွေကြေးတောင်းခံခဲ့သေးသည်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများသည် သူတို့ကိုယ် သူတို့ မျောက် ဖြစ်၍ဖြစ် မှန်းမသိ အလွန်သနားစရာကောင်းလှ၏။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို အကြောင်းပြု၍ ရရှိလာသည့် ငွေကြေးများထဲမှ မပြောစလောက် ငွေကြေး အနည်းငယ်မျှကို အသုံးပြုပြီး ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်တချို့ ရလို ရငြားအထင်နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ ၂၀၀၅-ခု၊ နိုဝင်္ဘာလတွင် ရခိုင်သမိုင်း သုတေသန ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ သည်။ သိုသော်လည်း ထိုရခိုင်သမိုင်း သုတေသနဆွေးနွေးပွဲမှ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် ဟူ၍ ဘာတစ်ခုမျှ မရရှိခဲ့သည့်အတွက် ဆွေးနွေးပွဲ၌ တင်သွင်းခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံတကာမှ ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင် များ၏ သုတေသနစာတမ်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ၊ Record များအားလုံးကို ညီညီလွင် နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်ထိ အစအနတောင် ရှာမတွေ့တော့ပေ။ Ph.D ပညာ ရှင်တစ်ဦး ၏ သုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်သည် အနှစ်ငါးဆယ်ခန့် တည်တန့်ခိုင်မြဲနိုင်သည်။ ထိုသုတေသန စာတမ်းများ ကိုသာ စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေဖြစ်ခဲ့ပါက ယခုအချိန်၌ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းလိမ်ကိစ္စကို ရှင်းနေရန်မလို တော့ပေ။ထို့အပြင် ”ဦးဟန်ညောင်ဝေအား တိုင်းရင်းသားလူမျိုး နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်ကွန်ယက် - Burma Ethnic Politics Watch Network (BEPWN)“ မှ မေလ၊ ၂၂၊ ၂၀၁၀ ရက်စွဲ့ဖြင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဟု ဆိုသူ ဦးဟန်ညောင်ဝေအပါအ၀င် ၇ ဦးအမည်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ကျိုးရှာ နိုင်ငံရေး သမား များအဖြစ် စွပ်စွဲလိုက်သည်။ တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ကို ထိခိုက်နစ် နာအောင် လုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် လည်းကောင်း၊ စစ်အာဏာရှင် သက်တမ်းရှည်အောင် အားပေးဆောင် ရွက်နေ ခြင်းတို့ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျသော အထောက်အထားများ၊ သက်သေများ ရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ထိုသူတို့ကို နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းလိုက်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ အပြည့်အစုံကို www.burmaethnicpoliticswatchnetwork.com မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ယခုတော့ ဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB မှ ဦးဘိုလှတင့်သည် အကြံကုန်လို့ ဂဠုံဆားချက်ဆိုသကဲ့သို့ ၂၀၁၀၊ ဧပြီလ က ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ငွေကြေးအလှူခံခဲ့ကြ ကြောင်းသိရှိရသည်။ အလှူပေးမည် ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း အလကားတော့ ပေးမည်မဟုတ်။ တစ်ခုခုတော့ တောင်းဆိုပေလိမ့်မည်။ ဆော်ဒီနိုင်ငံသည် သူတို့မွတ်စလင် နိုင်ငံပြန့်ပွါးရေးအတွက် ငွေကြေးအမြောက်အများကို သုံးစွဲ၍ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို လူတိုင်း သိသည်။ ယခုလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အဦး ပြိုပျက်သွားသည့် နေရာအနီး၌ ကုလားဗလီ ဆောက်လုပ်ရန် ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ ငွေကြေး ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ကျခံမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယခုလည်း ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာစေ ရန် အတွက် ဦးဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB မှ ၀န်ကြီးဦးဘိုလှတင့်တို့အား ငွေကြေး အမြောက်အများ ပေး၍ ဖေါ်ဆောင်ခိုင်းဟန်တူသည်။ သို့ကြောင့် အမေရိကန်လွှတ်တော် အမတ်အချို့နှင့် နီးစပ်မှုရှိသည့် NCGUB ၀န်ကြီးများသည် အမေရိကန် ကွန်ကရက်အမတ်များကို ပေါင်း၍ “ရိုဟင်ဂျာ”အား တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုရန် မြန်မာစစ်အစိုးရအား တွန်းအားပေးသည့် စာတန်းတစ်စောင်ကို အမေရိကန်လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်မျိုးသည် ၁၉၉၂-ခုနှစ်တွင် တစ်ခါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ကိုကျိုးရှာ ဒေါက်တာနိုင်အောင်နှင့် (ထိုအ ချိန်က ABSDF ဥက္ကဌ)လူတစ်စုမှ န၀တ စစ်အစိုးရကိုတိုက်ရန် ငွေကြေးလိုသည်ဟုအကြောင်းပြကာ ၁၉၉၂-ခုနှစ် ဇွန်လ ၇ ရက်နေစွဲဖြင့် ABSDF (ဗဟို)၏ သုတေသနဌာနမှ စာမျက်နှာ ၄၉ မျက်နှာပါရှိသည့် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် စာတမ်းလိမ်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အတွက် (ABSDF)အဖွဲ့သည် ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် လူဦးရေအားဖြင့် ၇ သောင်းမှ ၁ သိန်း ၂ သောင်းနီးပါးအထိရှိသော မွတ်ဆလင် လူငယ်လူရွယ်များကို အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အယ်လ်ကိုင်းဒါးနှင့် တာလီဘန်စခန်းများတွင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီးလျှင် အမေရိကရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦးမှအစ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခိုင်းခဲ့သည်။ အယ်လ်ကိုင်းဒါးသည် တပ်သားအရေ အတွက်အားဖြင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အင်အားရှိသော အစ္စလမ်မစ်အဖွဲ့များကို အပြင်းအထန် သင်တန်း ပေးပြီးနောက်၊ လူငယ်တို့၏ ဦးနှောဏ်ထဲသို့ ဘာသာရေးစစ်ပွဲအတွက် လူသတ်ရပါသည်ဆိုသော အတွေး အခေါ် တစ်ရပ်ကို ရိုက်သွင်းပေးသည်။ ယင်း မိန္ဆာအတွေးအခေါ်ကြောင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းသို့ အကြောက်တရားနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ပြန့်နှံ့ ခဲ့ရသည်။ထိုအထဲတွင် အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအဖွဲ့(ARNO)နှင့် ရိုဟင်ဂျာညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (RSO) တို့လည်း ပါဝင်ကြသည်။ ၄င်းအဖွဲ့တို့ကို အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ စခန်းများတွင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီး မြန်မာ ဘင်္ဂလားနယ်စပ်တွင် လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်ဟု ၀ီလီယံဂုဏ်း၏ အစီအရင်ခံစာ တစ်စောင်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ (၀ီလီယံဂုဏ်းသည် ခရစ်ယန်ဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းညွန်အသင်း၏ ဦးဆောင်ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်၊ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနှင့် ညှည်းပမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ဖြစ်သည်။)ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို ဦးဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB ၀န်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်တို့သည် ထိုသူတို့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုလျှက် မိမိတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါး အတွက် အသုံးချနေခြင်းသည် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတို့၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို မျက်ကွယ်ပြုထားပြီး ပြည်ထောင်စုအရေခြုံထားသော အမျိုးသားသစ္စာဖောက်များလုပ်ရပ်သာ ဖြစ်နေပေသည်။ သို့ကြောင့် ဦးဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB ၀န်ကြီးဦးဘိုလှတင့်တို့အား အသိပေးလိုသည်မှာ ကျနော်တို့ အဖိုးအဖီးများ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်မြေဧရိယာကို တစ်လက်မခန့်မျှ ဖဲ့ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်။ ထိုသို့ ဖဲ့ထုတ် ယူရန် ကြိုးစားလာသူ မှန်သမျှကိုလည်း ကျနော်တို့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့်၊ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိပါလာသူမှန်သမျှကို ကျနော်တို့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ အမျိုးသား ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ကြာင်း အလေးအနက် အသိပေးအပ်ပါသည်။ခိုင်ဘခင် (နယူးယောက်)အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ရိုဟင်ဂျာမိတ်ဆွေများ နှင့် ဘီဘီစီ သို့ပေးပို့ သော မေတ္တာစာ (ပေးစာ - ၄၉)
ရိုဟင်ဂျာမိတ်ဆွေများ နှင့် ဘီဘီစီ သို့သောတရှင်မှ ပေးသော မေတ္တာစာ ။မင်္ဂလာပါ ။ ဘီဘီစီ သတင်းဌာနနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ( သို့ ) ဘင်္ဂါလီ မိတ်ဆွေများကိုမင်္ဂလာပါလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုး ပီပီ ယဉ်ကျေးသောလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရှေးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ ။အခုတလော ( ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ) ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာမရှိဘဲ ဗလီအုပ်ထုပ်ကလေးတွေကိုယ်စီကိုယ်ငှ စောင်းထားပြီး အစ္စလာမ်ဝတ်တက်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေရဲ့ဓါတ်ပုံကို ဖော်ပြကာ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာကုလား ပြည်နယ်သာရှိတယ် လို့ အတိအလင်းမြေပုံနဲ့တကွ သတင်းထုတ်ပြန်ကျေငြာလိုက်တာကို ကျနော်လည်း အခြား သောတရှင်ပရိတ်သတ် မိဘပြည်သူများနည်းတူ ကြားသိရပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ဒါဟာ အဖြစ်မှန်လား ကလိမ်ကကျစ်လားဆိုတာမြန်မာပြည်သားတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် အထူးထပ်မပြောလိုတော့ပါဘူး။အကြံပေးချင်တာ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ပါ ။ မြန်မာ ပြည်ထောင်စုအတွင်း မြန်မာ့ရေမြန်မာ့မြေကို မှီပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ ( နိုင်ငံသားတိုင်း ရော တရားဝင်နိုင်ငံသား မဖြစ်သေးသူတိုင်း ပါ အပါအ၀င် ) မည်သည့်လူမျိုး ဘာသာ မဆိုကျေးဇူးရှင် အမိ မြန်မာပြည်ရဲ့အကျိုးကိုသာ ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ရပါမယ် ။ အခုမြန်မာပြည်ဟာ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး အဘက်ဘက်မှာ အရေးပါတဲ့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးတွေကို အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်းနေချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိတပ်မတော် ၂၅% ပါဝင်ပြီး အငြိမ်းစား စစ်ဘက်အရာရှိတွေနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက လွှမ်းမိုးမှုများတဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရ နဲ့အတိုက်အခံတွေထဲမှာ ပြည်ပအထိထင်ပေါ်ကြော်ကြားပေါက်ရောက်သူ NLD က မေမေစု တို့ လို အရင်က ပြဒါးတစ်လမ်းသံတစ်လမ်း အစေးမကပ်ကြတဲ့ အင်အားစုတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်လာတာကအစ အပြုသဘော ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ် ။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ စပ်ကူးမတ်ကူး ကာလမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ၊တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးကိုထိပါးနိုင်တဲ့ သွေးခွဲသပ်လျှို လီဆယ်လုပ်ကြံကလဖန်ထိုး ထုတ်လွှင့်မှုတွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးအရေခြုံဘာသာရေးအမြင်ကျဉ်း နယ်ချဲ့မှုတွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ် ။ ဒီ ကိစ္စတွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းယုံသာမက ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ဘီဘီစီ တို့လိုလီဆယ်သူတွေ အတွက်လည်း အကျိုးမရှိတဲ့ ထိရှလွယ်တဲ့ ကိစ္စ တွေဖြစ်ပါတယ် ။အခုတင်ကို ဘီဘီစီအနေနဲ့ လီဆယ်လုပ်ကြံမှုကြီး ပေါ်သွားတော့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုကို အထိုက်အလျှောက်ရလိုက်ပြီမဟုတ်ပါလား ။ ၈၈အရေးအခင်းတုန်းကလို ဘယ်ကျောင်းသူလေးကို ဘယ်စစ်သားကမုဒိန်းကျင့်လိုက်ပါပြီဆိုပြီး လိမ် ၊ ပြည်သူကို မြှောက်ပေး ၊ ပြီးမှတော်တော်ကြာမှ သတင်းအမှားပါဆိုပြီး ဘွာခတ် ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးပုံစံဟောင်းဝါဒဖြန့် ပုံစံတွေ လုပ်ပေးတိုင်း ယုံကြမဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။အင်တာနက်နဲ့ မီဒီယာတွေ ဒီလောက်တောင်တိုးတက်နေပါပြီ။ နောက်ထပ်ရလာဒ်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတွေကိုလည်း လူတွေက ပိုပြီး ချဉ်ဖတ်ဖြစ်လာရုံကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဘင်္ဂါလီပြည်နယ်လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး ။၂၀၁၁ အတွင်း မေမေစု ပဲခူးမှာ အောင်ဆန်းဂျာမွန်း စာကြည့်တိုက်ဖွင့်တဲ့မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခွေကို ကျနော် ပြည်ပကနေ ကြည့်ရပါတယ် ။မေမေစုပြောသွားတဲ့စကားကိုပဲ ကိုးကားပါရစေ ။ ( တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဟာ အရေးကြီး ပါသတဲ့ ) ။ ဒီတော့ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီ တွေ အနေနဲ့ တကယ်ကို သူတို့ ပြောနေတဲ့အတိုင်းအခွင့်အရေးတွေ ရပိုင်ခွင့်တွေ ရှိနေပါတယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေ အရ လွှတ်တော်ကနေရိုးရိုးသားသား ( ရိုး ရိုး သား သား ) တောင်းကြည့်ပါ ။ဒီလိုတောင်းနိုင်ဖို့ အတွက် လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကို အားကောင်းလာအောင် ၊ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တွေ တိုးတက်လာအောင် ၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီမိုကရေစီ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပြီး သူများ ပြည်ထောင်စု ကို ဖျက်စီးချင်စိတ် ၊နယ်ချဲ့ချင်စိတ် ၊ လူမျိုးရေး ၀ါးမျိုးချင်စိတ် ၊ဓါးမိုးသာသနာပြုချင်စိတ် ၊ အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ် ဘာသာရေး အဆုံးအမကိုတရားသေဖက်တွယ်လိုစိတ်တွေ လျော့ပါးလာအောင် ကျင့်ကြံကြိုးစားပါလို့ပြောပါရစေ။ မေမေစု ပြောသလို ( အားကြီးတဲ့သူက သဘောထားကြီးရမယ် ) ဆိုတဲ့တရားကို လက်ကိုင်ထားကြတဲ့ မြန်မာတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဘာသာလူမျိုး မတူလို့ဆိုပြီး သတ်သတ်ကြီး မုန်းတီးမနေတတ် တဲ့မြန်မာ့စိတ်ရင်းကို ကမ္ဘာက သိပြီးသားပါ ။ တကယ်တော့ ဘင်္ဂလားမှာ လူဦးရေပေါက်ကွဲလို့ ရခိုင်ကိုလာရောက်ကပ်မှီနေရတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေက ကပ်ပါးတွေပါ ။ကပ်ပါးက ကပ်ပါးလိုနေရင် ရခိုင်အပါအ၀င် ဘယ် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတိုင်းရင်းသားကမှ အလကားနေရင်း လူလူချင်းခွဲခြားနှိမ်ချတာမျိုးမရှိတဲ့ အင်မတန်ကို ဗြဟ္မစိုရ်တရားထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံပါ ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ဘဲ အိမ်ပေါ်တက်ပြီး အိမ်ရှင်ကိုပါးရိုက်လို့ အိမ်ဦးခန်း ချေးတက်ယို ချင်တဲ့အပေါက်မျိုးဆိုလို့ ကတော့ရခိုင် အပါအ၀င် ဘယ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားကမှ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ဒီတော့အကြံပေးချင်တာက မိတ်ဆွေ ရိုဟင်ဂျာ ( ခင်ဗျားတို့ က ဘင်္ဂါလီမခေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့) များ အနေနဲ့ အခု ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မြေပေါ် အကိုင်းအလက်ဖြစ်တဲ့ ကုလားပါတီတွေ ပါပြီးသားပါ ။ ပါတီတွေလဲဖွဲ့ပြီး မြေပေါ်မြေအောက် ဘက်ပေါင်းစုံက ထိုးဖောက် ဖို့ လုပ်နေတာ ရှိနေပြီမဟုတ်လား ။ ထားတော့ ။ ဒီပါတီတွေကို လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ဆံ့ အောင် ကြိုးစားပါ ။ဒါမျိုးက ဦးနုခေတ်မှာလဲ လုပ်ဖူးတဲ့ လုပ်ပေါက်တွေပဲ ။ မိတ်ဆွေတို့ကျွမ်းပါတယ် ။ လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် မိတ်ဆွေတို့အခု အော်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုတာကြီး ချပြပြီး မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ အခွင့်အရေးကိုအခုပြောနေသလို တောင်းကြည့်ပါ ။ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ က မိတ်ဆွေတို့ပြောနေတာ အမှန်လား ၊ ဒီမိုကရေစီ ကျသလား ၊ ဖြစ်သင့်သလားဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ် ။ အဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကိုတော့ အတင်းမြန်မာပါလို့ ဘယ်သူမှတော့ပြောလို့ရမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့လွှတ်တော်မှာ တောင်းသလောက် အခွင့်အရေးမရခဲ့ရင်တောင် ဥပဒေရဲ့အစောင့်အရှောက်အောက်မှာ ( နိုင်ငံသား ခံခွင့်ပေးတာ မဟုတ်ရင်တောင်လူသားချင်းစာနာမှုရှိတဲ့ ) အသင့်တော်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပေးပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ လွှတ်တော်ရှိတယ် ။ ဥပဒေရှိတယ် ။ ဘာမှအပိုဆာဒါး လီဆယ်တာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့ ။ ရှင်းနေတာကို အမယ်ဘုတ်ရဲ့သူ့ချည်ခင် ဇာတ်ထုတ်တွေ လာမရိုက်ပါနဲ့ ။ အဲ့ဒီ လွှတ်တော် နဲ့ ဥပဒေအားမကောင်းသေးဘူး ဆိုရင် အားကောင်းလာအောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးကြပါ ။မ၀ိုင်းဝန်း မကြိုးပမ်းချင်ရင်တောင် မဖျက်စီးပါနဲ့ ။ လွှတ်တော်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တည်ဆောက်နေဆဲကာလကို မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်အောင်လီဆယ်လုပ်ကြံ စော်ကားပုတ်ခတ် လိမ်ညာသွေးခွဲပြီး မဖွပါနဲ့ ။ လွှတ်တော် နဲ့ဥပဒေ အဆုံးအဖြတ်အရ ယုတ်ဆွအဆုံး မိတ်ဆွေတို့ ကို နိုင်ငံထဲမှာ လုံးဝလက်မခံနိုင်လို့နေရင်းအရပ်ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားကို ပြန်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တောင်မူရင်း ဘင်္ဂလားက လက်မခံတော့လို့နိုင်ငံမဲ့ နေတဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အားမငယ်ပါနဲ့ ။ နိုင်ငံမဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို အရမ်းအရမ်းထောက်ထားစာနာတတ်ပြီး အကူအညီ အရမ်းပေးတတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ သဘောကောင်းကြီး ၊ ကမ္ဘာ့သူတော်ကောင်းကြီး ကိုရွှေအမေရိကန် နဲ့ သူ့ နောက်လိုက် ( ဘီဘီစီရဲ့ထမင်းရှင် ) အင်္ဂလန် တို့ က မိတ်ဆွေတို့ကို လူသားချင်းစာနာပြီးသူတို့နိုင်ငံမှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးကြရှာပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့လိုမှ သူတို့လိုကမ္ဘာ့ သဘောကောင်း မနောကောင်းကြီးတွေကတောင် လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ ကိုယ်၌က ဘယ်သူမှ လက်မခံချင်တဲ့ --ျီးထုတ်တွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ လိုပါပြီ ။ ဒီလို --ျီးထုတ်မျိုးကို အမေရိကန် နဲ့ဗြိတိန်တို့ က သူတို့ ပြည်ရဲ့ လူဝင်မှုဥပဒေအရ အစ္စလာမ်တွေကို အကြောက်အကန်တင်းကျပ်ထားပေမဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံထဲကိုကျတော့မရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအမည်တပ်ပေးပြီး အတင်းကို ထိုးထဲ့ နေတာ သဘောရိုးဟုတ်မဟုတ်ထင်ရှားလှတဲ့အတွက် ဘယ်နိုင်ငံသားကမှ လက်မခံနိုင်တာကို လည်း မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပေးစေလိုပါတယ် ။ ဒီလို --ျီထုတ်ဖြစ်နေလို့လဲ မိတ်ဆွေတို့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ။ လူ့ တန်ဖိုးဆိုတာ အဲဒီ လူကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ရမှာပါ ။ငါတို့ ဘယ်လို အဓမ္မတရားသေ၀ါဒ ဆုတ်ကိုင်မှုတွေ ရှိနေလို့ ၊ ဘယ်လိုမတော်မတရား အကြံအစည်တွေ ကြံစည်နေလို့၊ ဘယ်လို သူတပါး ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေမိလို့ ငါတို့ဒီလို --ျီးထုတ်ဘ၀ ရောက်ရတယ်ဆိုတာ ပြန်လည် ဆင်ခြင်ပြီး အမြင်မှန်ရလာတဲ့ တနေ့ မိတ်ဆွေတို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဓါးမိုးသာသနာ လူဖောက်သာသနာရဲ့ အသေခံတပ်သားအဖြစ်က ရုန်းထွက်နိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်တည်ဆောက်လာနိုင်ရင် မိတ်ဆွေတို့ အတွက်နေရာမရှားပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ မူရင်းဒေသဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ ကို လက်မခံတဲ့ဘင်္ဂလားနယ်ကတင်ကို မိတ်ဆွေတို့ ကို လာပါ လာပါဆိုပြီး ကန်တော့ပွဲနဲ့ပြန်ပင့်ယူသွားကြရပါလိမ့်မယ် ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ သပေးလိုတာကတော့ မိတ်ဆွေရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ လူ့ ဘ၀ တိုတိုလေးမှာ ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး ၊နယ်ချဲ့ရေး ၊ မလျှော်သြဇာတည်ဆောက်လိုရေးတွေအတွက်နဲ့ ဆိုးညစ်စွာအချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ ။ လူ့ ဘ၀ ခဏတာကို မေတ္တာ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ပြီးအကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ ။ မိတ်ဆွေ ဘီဘီစီ ဌာန အနေနဲ့ ပိုမိုပြီး ရိုးသားမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်နိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်းကျနော့ မေတ္တာစာကို ဒီတင် နိဌိတံ ပါရစေ ခင်ဗျား ။မိတ်ဆွေများ ကိုယ် စိတ် စီးပွား သုံးပါးမကြွင်း ချမ်းသားခြင်း နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ ။ပုံရိုဟင်ဂျာဆိုသူ များ ၏ ဘ၀ကို စာနာ နားလည်သူ နှင့် ဘီဘီစီ သတင်းဌာန၏ကောင်းကျိုးအား လိုလားသူ ။ကိုပေါင် ( ခေတ္တ - အာရှပင်လယ်ပြင် ) ။
အခုဖြစ်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဘယ်သူမှ မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီးကို တွေ့လာရပါတယ်။ အတိုက်အခံဆိုတဲ့သူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဌာနတွေ၊ ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မီဒီယာကြီးရဲ့ တာဝန်မဲ့ မလေးမစားနိုင်မှုတွေ၊ သတင်းဌာနအခြင်းခြင်း ဖေးမမှုတွေကို အတိုင်းသားတွေ့ရမှာပါပဲ။ ပြဿနာအစကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း BBC ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့မလိုက်ဖက်ပဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့ မြေပုံက စ ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ တစ်ချို့တွေက မေးလာကြတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးက ရေးထားတာ ကြာလှပီ ဘာလို့ အခုမှ အရေးတယူလုပ်လဲလို့ မေးလာပါတယ်။ ဒီ ဆောင်းပါးကို ဘီဘီစီက Publish လုပ်တဲ့အချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေဆဲ ကာလမှ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ အရေးတယူ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားတော့လည်း ဒေါ်စု လွတ်ချိန်နဲ့ ကိုက်နေတဲ့အတွက် အရေးတယူ ဘယ်သူမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးလည်း သိကြတဲ့အတိုင်း ဦးနုတို့ ခောတ်ကတည်းက အခုလက်ရှိအချိန်အထိ အာဏာငန်းဖမ်းလာတဲ့ အမတ်တွေဟာ သူတို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ ၀န်မလေးမှန်းကို ချက်ကောင်း စောင့်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တစ်စခန်းထလာပါတယ်။ ရှေးတုန်းကနဲ့ ပုံစံမတူတဲ့ သူတို့ထတဲ့ တစ်စခန်းကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပုံဖော်လာပါတယ်။ အဲ့ဒိလို ပုံဖော်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကို နှစ်နဲ့ချီပြီးသူတို့ဟာ ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ မီဒီယာတော်တော်များများမှ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို ပုံဖော်လာရာမှာ က ကြီးကို ယ ပက်လက်ဖြစ်အောင် တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒီကိစ္စကို မကျေလည်နိုင်တဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေက ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြလာတာပါ။ အဲ့ဒိလို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြလာတော့မှ အရင်တုန်းက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ တောက်လျှောက် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေက အာရကန်ဆိုတဲ့ စာကို သူတို့ အပိုင်လိုလို ယူသုံးထားတာကို ကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေ တောက်လျှောက် ဆန့်ကျင်ခဲ့တာတွေဟာ Media တွေရဲ့ တစ်ဖက်သပ်နှိမ်ထားခြင်းကြောင့် ဘယ်သူမှ မသိရှိခဲ့တာတွေ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်လာပါတော့တယ်။ အဲ့ဒိမှာ ညောင်မြစ်တူးတော့ ညောင်ဥပေါ်ဆိုသလိုတွေ တောက်လျှောက် ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ DVB ငွေကြေး ကိစ္စဖြစ်ကတည်းက ကျွန်တော် သံသယရှိနေလို့ စောင့်ကြည့်နေတာမှာ မစ္စတာ ဟန်ညောင်ဝေ သမ္မတကြီးစကားကြောင့် မြန်မာပြည်ကို အလည်ပြန်လာမယ်ဆိုကတည်းက ဒီယုံမြင်လို့ ဒီခြုံထွင်တယ်ဆိုတာ နားလည်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒိအတောအတွင်း သူတို့အခြင်းခြင်း ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ စာတွေ မှတ်ချက်တွေထဲမှာ တစ်ခုကို ကျွန်တော် မှတ်မိလိုက်တာက ဟန်ညောင်ဝေလို လူမျိုး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ချင်ရင် ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်သလို ပြန်လို့ရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့တော့ အော် သူတို့လည်း အရင် စစ်အစိုးရလို တရားဝင်ခရီး၊ တရားမ၀င်ခရီး ရှိတာပဲလို့ နားလည်လိုက်တယ်။ဆက်ကာ ဆက်ကာနဲ့ပဲ ဟန်ညောင်ဝေ အာရပ်ကြီးတို့စီက ပိုက်ဆံညာယူတာတွေ၊ ဒီမိုအကွဲအပြဲဇာတ်လမ်းတွေ အွန်လိုင်းမှာ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်လာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့ကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ မီဒီယာတွေကို ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော် တောက်လျှောက်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်း Exile မီဒီယာတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက ၀င်ဖတ်တာကတော့ Mizzima, Irrawaddy နဲ့ Irrawaddy Blog ပေါ်လာတော့ သူ့ဘလော့ပေါ့ဗျာ တောက်လျှောက် ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေကို လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ တိုက်တွန်းနေတဲ့၊ အမေရိကားကနေ အစိုးရကို လေ နဲ့တော်လှန်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် ဘလော့လဲ တစ်ခါတစ်လေ အပျင်းပြေ ၀င်ဖတ်တယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ပင်တိုင်ကတော့ မဇ္ဇိမနဲ့ ဧရာဝတီပါပဲ။ အဲ့ဒိနှစ်ခုဟာ ကျွန်တော့အပေါ်မှာ တော်တော့်ကို လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်။ ဒီဗီဘီကိုတော့ ကိုနေဇော်နိုင်ရဲ့ တော်စမ်းပါ ၀န်ကြီးရာ နဲ့ခိုက်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါကကျွန်တော့ အပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ မီဒီယာတွေအကြောင်းပါ။ ခုဏက ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဖြစ်လာတော့ လူတွေက အစိုးရရဲ့ ဆိုက်ဝါးကို သတိထား၊ အစိုးရလမ်းကြောင်းလွှဲတာကို မြောပါမသွားစေနဲ့လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ထောက်ပြစရာတွေ အများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စ စဖြစ်တာ ဘီဘီစီနဲ့ပါ။ ဘီဘီစီက ပြည်သူတွေဆန္ဒကို လုံးဝဂရုမစိုက်ပဲ မြေပုံပြန်ပြင်တယ် ရှေ့နောက်မညီတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်ပီးတော့ သူ့ပရိတ်သတ်တွေကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံကြောင့် ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေ တော်တော် စိတ်ဆိုးပြီး ပိုပြင်းထန်လာပါတယ်။ မီဒီယာတွေရဲ့ ဖေ့ဘွတ် ပေ့ခ်ျမှာ သွားရေးကြတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ Exile မီဒီယာရဲ့ အယ်ဒီတာတွေစီမှာ သွားရေးကြတယ်။ ဘာဖြစ်သလဲ ဖျက်ပစ်ကြပါတယ်ဗျာ။ ခါတော်မှီ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ရစေဖို့ အပြည့်အ၀ အာမခံပါတယ်ဆိုပီး ကြွေးကျော်လာတဲ့ Blog မှာတောင် မှတ်ချက်ကို ဖျက်ပစ်တဲ့အပြင် ထပ်ရေးမှာစိုးလို့ မှတ်ချက်ရေးသူကို ဘလော့တယ်ဗျ။ အဲ့ဒိမှာ တစ်ချို့တွေက အားကိုးတကြီး ဒီကိစ္စကို DVB ကိုပြောမယ် DVB ဆိုရင်တော့ ငါတို့ဘက်ပါမှာပဲ အဲ့ကြရင် BBC တော့နာမှာပဲ ဆိုပီး အားကိုးတကြီး DVB ကိုသွားပြောကြတယ်။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများ ဘယ်လောက်တောင် ယုံကြည်ကိုးစားကြသလဲဆိုရင် DVB, RFA, VOA, Mizzima, Irrawaddy အကုန်လုံးလိုလိုကို ဒီကိစ္စ စော်ကားခံရတာ မကျေနပ်ဘူးလို့ သွားပြောလိုက်ကြတာ သတင်းဌာန တစ်ခုခုကများ ငါတို့ဘက်ရပ်တည်လေမလား ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုလဲ သူတို့မှာ မချိတင်ကဲနဲ့ကို လာမေးကြတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ရှိရှိသမျှ သတင်းဌာန နှာစေးနေတော်မူပါတယ်။ နောက်ဆုံး အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့၊ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူများလို့ ကိုယ့်ကို နာမည်တပ်ထားခဲ့တဲ့ သူတွေလည်း ပါတ်တော ပိတ်ကုန်တော့တာပါပဲ။ အရင်တုန်းက အဖေ့ဘုတ်မှာ Custom Message တင်တာကိုတောင် သတင်းလုပ်ရေးတဲ့ Irrawaddy Blog လည်း ဒီသတင်းကို အရှင်းတောင် မဟပါဘူး။ ပြည်သူတွေ မကျေနပ်ချက်တွေ ပေါက်ကွဲလာတဲ့အချိန်မှာ အရင်တုန်းက Irrawaddy နဲ့ DVB သတင်းဌာနတွေရဲ့ ယခင်က တင်ထားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်းတွေ ပြန်ပြန့်လာပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်တာလား တမင်ရွဲ့တာလား မသိပေမဲ့ အကုန်လုံး ဒေါသတချောင်းချောင်း ထွက်လာကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အစိုးရ ၀ါဒဖြန့်တဲ့ ဆိုက်ဝါးထဲမှာ မြောနေတယ်လို့ ကျွန်တော့ကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကို ထောက်ပြချင်လာတာက အခုလို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ဘူးတဲ့ နာမည်ကြီးမီဒီယာကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘီဘီစီကို ဖေ့ဘွတ်ကနေ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ တစ်ခဲနက် ၀ိုင်းပြီး ကန့်ကွက်ကြတာကို ကျန်တဲ့မီဒီယာတွေ နှုတ်ဆိတ်နေတာကိုပါပဲ။ မဇ္ဇိမ သတင်းအယ်ဒီတာကြီး ဦးစိန်ဝင်းပြောခဲ့တယ် ဒီကိစ္စဟာ သိမ်မွေ့တဲ့ကိစ္စမို့လို့ ကျွန်တော် နှာစေးနေကြောင်းတဲ့။ ကဲ နောက်ဆုံး ဘာသာရေး လူမှုရေး မပါတ်သက်ချင်ရင်တောင် ပြည်သူတွေ အခုလို ဆန္ဒပြနေပါတယ်ဆိုတာကိုတောင် သတင်းလေးအဖြစ်တောင် မရေးရဲကြအောင် အားလုံး တိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်။ မထူးဆန်းဘူးလား၊ BBC, VOA, RFA, DVB, Mizzima, Irrawaddy ရှိရှိသမျှ Exile Media တွေအားလုံးဟာ အစိုးရရဲ့ ပိုက်ဆံရထားလို့များ နှုတ်ပိတ်နေကြတာလား.. နဂိုကမှ အစိုးရဆို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောချင်ကြတဲ့ ဒီ မီဒီယာတွေဟာ ဒါတကယ့်အကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝေဖန်ပါလား မဝေဖန်ရဲခဲ့ကြသလို နှုတ်ပိတ်ပြီး ခတ်ဆိပ်ဆိပ်ပဲ နေကြပါတယ်။ မနေနိုင်တဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်တစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ့်မျက်နှာဖုံး ကိုယ်ဖွင့်ပီးတော့ ဘီလူးဆိုင်းနဲ့ ထွက်လာတယ်။ စေတနာမမှန် ဒေါ်လာအကျိုး မျှော်ကိုးပီ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ထွက်လာလေတော့ သူလည်း တစ်ခါတည်း ကားယားကြတာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ သူ့နာမည် တန်းပြီးတော့ကို သေ သွားတော့တာပါပဲ။ ကျန်တဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာလည်း ဗူးပေါ်သလို ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ သူတို့ တောက်လျှောက် ဖုန်းကွယ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်အသင်း ရဲ့ အာရကန်ကို ဆန္ဒပြတာတွေဟာလည်း အခုမှ လူတွေကြားထဲ ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ ပထမဆုံး ထောက်ပြချင်တာကတော့ ရခိုင်မှာ နစက နှစ်ယောက် အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စ။ အဲ့ဒိသတင်းကို Exile Media တွေလုံးဝ နှာစေးနေတယ် မထုတ်လွှင့်ဘူး။ ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂါလီ ခေါ်တောတွေ လုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှု မှန်သမျှ တစ်ခုမှကို မဖော်ပြဘူး။ ဒါတွေဟာ ရိုးသားမှု ရှိခဲ့ပါသလား။ နောက်တစ်ခုက ဘင်္ဂါလီတွေ တရားမ၀င်နည်းလမ်းနဲ့ ရန်ကုန်ကို လာကြတဲ့ကိစ္စ။ ဘင်္ဂါလီတစ်ယောက်ဟာ ရန်ကုန်ကို လာချင်ရင် နစက ကို 15 သိန်းပေးရပါတယ်။ နစက ရဲ့ စစ်ကားတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို သယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းမှာ အတားအဆီးလွတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နစက ရဲ့ အကြီးအကျယ် ခြစားတဲ့ အမှုပါ။ ကျွန်တော်တို့လို ပမွှားတွေတောင် သိမှတော့ မြန်မာပြည်မှာ အပ်ပျောက်၊ ဖိနပ်ပျောက်တာတောင် အတိအကျ သိကြတဲ့ Exile Media တွေ နှုတ်ဆိတ်နေကြတပါတယ်။ သူတို့ ဘာလို့မအော်ရဲကြသလဲ အဖြေက ရှင်းပါတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ နစက ကိုအရေးယူလိုက်ရင် ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ ရန်ကုန်ကိုလာမယ့် လမ်းကြောင်းပျောက်သွားရင် သူတို့နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးနေတဲ့ သူတွေ သူတို့ကို ထုမှာစိုးလို့လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောက အမတ်နှစ်ယောက် မတရားနည်းလမ်းနဲ့ အမတ်ဖြစ်လာတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး မဲခိုးတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဆိုပီး ကြွေးကျော်လာကြတဲ့ Exile Media တွေ ဒါကို ပါးစပ်ပိတ်ထားကြတယ်။ ရခိုင်အမတ်တွေ ကန့်ကွက်တာတောင် သူတို့စာမျက်နှာတွေပေါ် မတင်ခဲ့ဘူး။ ဟောအခုတော့ အစိုးရက စိစစ်တွေ့တော့ အဲ့ဒိအမတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့မအော်ပါဘူး။ ဒီအမတ်တွေကို ဘာလို့ အစက လက်ခံခဲ့သလဲ၊ အခုဘာလို့ထုတ်လဲ၊ လိမ်လည်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်လိုအရေးယူသင့်သလဲ စသည်စသည် တကယ်အော်မယ်ဆို အကြောင်းခြင်းရာတွေ ပြည့်လို့ ဒါပေမဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ သူတို့တွေ ကြမ္မာငင်တော့တာပါပဲ။ ပြည်သူတွေအတွက် စစ်မှန်သော အသံဖြစ်ရပါမယ်လို့ ကြွေးကျော်ခဲ့တဲ့ သူတို့ကို ပြည်သူတွေက ပြန်မေးနေကြချိန်မှာတော့ ရင်မဆိုင်ရဲတော့ပဲ မေးခွန်းတွေကိုသာ တွင်တွင်ဖျက်နေပါတော့တယ်။ သူတို့ဟာ အစိုးရရဲ့ မကောင်းကြောင်းကို ဝေဖန်ချင်တာတောင်မှ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်မယ်ဆိုရင် တုတ်တုတ်ကို မလှုပ်ရဲတာ တအားသိသာလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်မှာ အစိုးရက အကျဉ်းသားတွေ တစ်ပြုံကြီး လွှတ်တဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေ လက်စောင်းထက်တာကို သူတို့ဟာ ထိုင်ငေးနေရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ ပြောစရာရှိတာက Exile Media တွေရဲ့ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲက နာမည်ကြီး ဂျာနယ်တစ်ချို့ရဲ့ သတင်းထောက်တွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့လည်း Exile Media တွေမှာ မထင်မရှား နာမည်ဝှက်တွေနဲ့ သတင်းရေးနေရတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွား သတင်းရေးချင်မှာပါပဲ။ အခုလို စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေ တဖြည်းဖြည်းရလာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းကို ဦးစားပေး ဇောင်းပေး သတင်းပို့လာတဲ့ သတင်းထောက်တွေကြောင့် ပြည်ပ မီဒီယာတွေ သတင်းရှားလာတာလည်း တဖြည်းဖြည်းပေါ်လွင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် သတိထားပြီး ကြည့်နေတယ် ဒေါ်စုနဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု စတင်ကတည်းက ပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေ ထိုင်သွားကြပါတယ်။ တော်တော်လေးကို သတင်းတွေ ရှားပါးလာတယ်။ အခု လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ လက်စောင်းထက်လာမှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာဟာ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာရာမှာ အခု ဘင်္ဂါလီနဲ့ ဘီဘီစီ ကိစ္စပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ မျက်နှာဖုံးတွေ ကွာကို ကျလာပါတော့တယ်။ သူတို့တွေ နာမည်သေကုန်ကြပါပီ။ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ပျက်မှုကို တော်တော်လေးကို ရသွားကြပါပီ။ ကိုချိုတူးဇော် ပြောသလိုပါပဲ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဂရုမစိုက်သော အစိုးရနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို မလေးစားသော သတင်းဌာနတွေဟာ ရေရှည်မခံဘူးဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း မှန်လာပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းဌာနတွေအနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်သူတွေ ရှိနေလို့ လုပ်စားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သူတွေ ရွံ့မုန်းသွားခဲ့တဲ့ နောက်တော့ သူတို့ရဲ့ သတင်းဌာနတွေရဲ့ ထောက်ပံ့ငွေတွေ ဖြတ်တောက်ခံရရင် သူတို့အလုပ်ပြုတ်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း မေ့နေကြပုံရပါတယ်။ အဆုံးသတ်အနေနဲ့ကတော့ ဘီဘီစီနဲ့ ဘင်္ဂါလီ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ အမြတ်ထွက်သွားကြတာကတော့ အစိုးရနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ပါလားဆိုတာကို လူတွေ ပိုသိသွားကြတယ်၊ အတိုက်အခံ သတင်းမီဒီယာတွေ မျက်နှာဖုံးကွာကျကုန်တယ်၊ အရှက်ကွဲကုန်တယ်၊ ပြည်သူတွေ အယုံအကြည်မဲ့သွားတယ်။ ကဲ ငါတို့မပြောဘူးလား ဘီဘီစီ လိန်နေသည်၊ ဗီအိုအေ ညာနေသည်၊ RFA, DVB လေလှိုင်းသံ အကောက်ကြံ ဘာညာတွေဗျာ ဆိုပီးတော့ စင်ပေါ်ကနေ မိန့်မိန့်ကြီး ကျုပ်တို့ကို ထိုင်ကြည့်နေမှာ မြင်ယောင်တယ်။ အစိုးရကို ကြည့်မရတဲ့ ကျုပ်တို့ဟာ နေရင်းထိုင်ရင်းကို အစိုးရရဲ့ ပဉ္စမံ တပ်သားတွေအနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ မျက်နှာဖုံးကို ခွာချပေးလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေကို လေးစားခဲ့မိတဲ့ ကျုပ်တို့ကိုယ် ကျုပ်တို့ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အားကိုကိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကျုပ်တို့တွေလည်း ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်းကို သိသွားတော့တာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လျှောက်မယ့်လမ်းကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့ သဘောပေါက်သွားတဲ့ ကျုပ်တို့အတွက်ကတော့ အမျိုးသားအရေးထက် ဒေါ်လာအရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ ခင်ဗျားတို့ နာမည်တွေ သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေ သေသွားပီဗျာ... တော်ပီ ရေးလေ ရေးလေ ရင်ထုမနာလေပဲ.... အစိုးရပြုံးပြုံးကြီး ကျုပ်တို့ကို ကောင်လေးတွေ ငါတို့ကိုယ်စား ဆော်တာ တော်သဟဆိုပီး ကျောကုန်းကို ဟိုသတ္တ၀ါကို ပွတ်သလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေမှာကို အသဲအနာဆုံးပဲ..... by James Mmt
၂၀၁၄ မှာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ရရှိဖို့အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးက အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ASEAN ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို တာဝန်ပေးအပ်ဖို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ အားလုံးက ကန့်ကွက်သူမရှိ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ၁၇ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာ ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဆီယံရည်မှန်းချက်တခုဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံမိသားစု၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို စုစည်းထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဦးဆောင်ဦးရွက် လမ်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးအပြီးမှာ သမ္မတရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်ကနေပြီးတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူရတာထက် တာဝန်တွေပိုပြီး ကြီးလေးလာတယ်လို့ မှတ်ချက်ချ ပြောဆိုတာကို ဖောက်သည်ပြန်ချပါတယ်။ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ တာဝန်ယူထားရမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပိုပြီး ဝင်ဆန့်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ပိုပြီးလုပ်ပြဖို့လိုတယ်လို့လည်း အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက တိုက်တွန်းခဲ့ကြတယ်လို့ ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောပြပါတယ်။သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးကိုကိုလှိုင်၊ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်နဲ့ ဦးစစ်အေးတို့ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အတူ ဒီ ထိပ်သီးညီလာခံကို လာပြီးတက်ရောက်နေကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဆီယံဥက္ကဌရာထူး ရရှိရေးအတွက် မြန်မာအတိုက်အခံများက ဆန့်ကျင်မှုတွေ ကန့်ကွက်မှုတွေ အများအပြားလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သူမရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အာဆီယံဥက္ကဌရထူးရရှိဖို့ ထောက်ခံကြောင်း လုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ထုံးစံအတိုင်း ကန့်ကွက်ရင်း ဆန့်ကျင်ရင်းနဲ့ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်ကတိုင်း ဘာမှမဖြစ်ပဲ ကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ Read More
သတင်းမှားတွေ ထုတ်လွှင့်မှုကြောင့် ဘီဘီစီ ဌာနချုပ်ရှေ့တွင် ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့
သတင်းလိမ်မှုများကြောင့် ဘီဘီစီကို အင်္ဂလန်ရောက် မြန်မာများက ဆန္ဒပြမှုတစ်ခု နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သတင်းမှားများအတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဘီဘီစီ သတင်းဌာန ရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ယူကေရောက် မြန်မာများက ပြန်လည် ဖြေရှင်း တောင်းပန်ရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲကို နိုဝင်္ဘာလ ၁၆ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၃၀ မှ နံနက် ၁၁း၃၀ (လန်ဒန်စံတော်ချိန်)ထိ ဘီဘီစီ ဌာနချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ရခိုင်အပါအဝင် တခြား မြန်မာတိုင်းရင်းသားများက စုပေါင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် 1( Burma ) ( Burma )---- ( Not for Sale )( Not for Sale ) 2( Arakan State ) ( Arakan State ) ---( Not for Sale ) ( Not for Sale ) 3( Anna Jones )---- ( Out ) ( Out )4( Anna Jone stop giving wrong information about Rohingya ) ---- ( Now ) ( Now ) 5(BBC stop giving wrong information about Rohingya ) ---- ( Now ) ( Now ) 6( Anna Jones stop creating conflict in Burma ) ----- ( Now ) ( Now ) 7(BBC stop creating conflict in Burma ) ----- ( Now ) ( Now ) စသည့် ကြွေးကြော်သံများဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ သတင်းမှားတွေ ထုတ်ပြန်မှုကြောင့် ရခိုင်အမျိုးသားများ အပါအဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများကလည်း ကန့်ကွက် ရှုပ်ချ လာကြခဲ့သည့်နောက် ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်းတွင် အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချမှုမှာ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘီဘီစီ မှာ ပိုက်ဆံယူပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မြန်မာတွေကတော့ ဘာမှဝင်မပြောခဲ့ကြ မဖြေရှင်းပေးခဲ့ကြပါဘူး။ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ( Anna Jones )---- ( Out ) ( Out ) လို့ အော်ခဲ့ပေမယ် Anna Jones လည်း ထွက်မလာခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ၏ ယုံကြည်မှု ရရှိထားသော Lonely Planet ခရီးသွား လမ်းညွှန်စာအုပ်က ရွေးချယ်သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် ခရီးသွားရန် အကောင်းဆုံး ၁၀ နိုင်ငံစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်လာကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ Lonely Planet က ရွေး ချယ်ခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ခရီးသွား ၁၀ နိုင်ငံ ထဲတွင် ပထမအဖြစ်ယူဂန်ဒါ၊ ဒုတိယနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား ဖော် ပြထားပြီး တတိယအဖြစ် ယူကရိန်း နိုင်ငံအားဖော်ပြထားသည်။နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ် မြောက်လာပြီး အဖွဲ့လိုက် မဟုတ် သော ခရီးသွားများအား မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် လာရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက် ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဖော် ပြထားသည်။ ဒီသတင်းက မင်္ဂလာ သတင်း ပဲ၊ ဆုရတာထက် ပိုကောင်းတယ်။ဒီနာမည်မပျက်အောင် ဆက် ထိန်းသိမ်းရမယ်ဟု ရန်ကုန်မြို့ အခန်း ( ၃၀) ပါ ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်ထား သော ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ရွေးချယ်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက် ၍ Lonely Planet က ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော် အကြောင်းအား ဖော်ပြထားပြီး တောင်ကုန်းများ၊ သဲအဖြူရောင် ကမ်းခြေများ၊ ဝိုင်းရံထားသော စွန်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့် နိုင်ငံဟုညွှန်းဆိုထားသည်။ထို့အပြင်နိုင်ငံအတွင်း၌လည်း ရှေး ဟောင်း မြို့များ၊ မရေတွက်နိုင်သော သော ဘုရားများနှင့် ပုဂံဒေသအ ကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထား သည်။ တခြားစိတ်ဝင်စားစရာက ကမ္ဘာမှာ သဘောအကောင်းဆုံး လူသားတွေ အဲဒီမှာရှိတယ် ဟုလည်း တင်စားထားသည်။ Lonely Planet ခရီးသွား လမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသွားများ လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ် ပြီး ယခင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံက ထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကစ၍ ဘီဘီစီသတင်းဌာနသို့ ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။Lonely Planet က ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သော ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံး ၁၀နိုင်ငံ မှာ ယူဂန်ဒါ၊ မြန်မာ၊ ဂျော်ဒန်၊ ဂျာဗား၊ ယူကရိန်း၊ ဒိန်းမတ်၊ ဘူတန်၊ ကျူးဘား၊ နယူးကာလီ ဖိုး နီးယား၊ ထိုင်ဝမ်နှင့်ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်က လည်း ထိုကဲ့သို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ရွေး ချယ်နိုင်ငံတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် ဂျပန် နိုင်ငံက ထိုနှစ်ကစ၍ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ တိုးတက်ရရှိလာခဲ့ ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်သူတို့က သုံးသပ်သည်။ယခုနှစ် ခရီးသွားရာသီအ တွက် ဒီဇင်ဘာလအထိ ရရှိထား သော စာရင်း ဇယားများအရ ယမန် နှစ်ကထက် ၂၅ရာခိုင်နှုန်း တိုး တက်လာနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အတွင်းရေးမှူးက သုံးသပ်ထားပြီး နိုဝင်ဘာလအတွက် ရန်ကုန်မြို့ ရှိဟိုတယ်များ အခန်းပြည့် ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။7Day News Journal မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း
အသက်ပေးကာကွယ်မယ်အော်သူများကို အသက်ပေးစရာမလိုပဲ တယောက်တစ်သိန်းပဲထည့်ခိုင်းရန် ဦးခင်ရွှေပြော
မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ပါးများစွာ ကျွန်ပြုခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ရုံးထိုင်သွားသည့် အတွင်းဝန်ရုံး “တချို့ပြောတာလဲ ကြားတယ်။ ဒါကြီးကို အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်မယ်တဲ့။ အသက်ပေးစရာ မလိုပါဘူး တယောက် တသိန်းထည့်ပြီး ဒါကြီးကို ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင် အဲ့လူတွေ ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ အသက်သာ ပေးကြမှာ။” လို့ ရန်ကုန်မြို့ ယုဇနဂါးဒင်း ဟိုတယ်မှာ အင်္ဂါနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းအကြောင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အဖွင့်အမှာစကား၌ ပြည်တွင်း မီဒီယာများသည် ပြည်ပမီဒီယာများ ကို ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးခင်ရွှေမှ အ ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံတွေကို ဒီတိုင်းထားပြီး ပျက်ဆီးစေမယ့်အစား ဟိုတယ်များဖွင့်ကာ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ဖို့အတွင် အရင်က စိတ်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စ၊ အတွင်းဝင်ရုံး ကိစ္စများ ကို ဒီမိုကရေစီ မူအတိုင်း ပြည်သူ့သဘောထားဆန္ဒကို အစိုးရက လိုက်လံဖြည့်ဆည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မီဒီယာများကတော့ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ အဆိုးဖက်ကိုမြင်ပြီးရေးတာတွေကို ဆက်လုပ်နေတာကြောင့် ဦးခင်ရွှေက အပြစ်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာသမားတွေရဲ့ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေရေးနေခြင်းက အလွန် စိတ်ဓာတ်ကျဖို့ကောင်းကြောင်းကိုလည်း“မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ ရေးတယ်ဆိုကတည်းက တော်တော်လေးကို စိတ်ဓါတ်ကျဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းတာ မမြင်တဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံတော်က သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်း ကောင်းနေတာကိုလဲ အသိအမှတ်မပြုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်။”ဟု ဦးခင်ရွှေက ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးများရုံးသည် အင်္ဂလိပ် အမွေအနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုံးထိုင်တယ်ဆိုတာ လပိုင်းသာ ကြာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးများထက် မြန်မာနိုင်ငံအား ကျွန်အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေသာ ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတော်မှ ထိန်းသိမ်းပါက စာရိတ်များစွာ ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း မော်နီတာဂျာနယ်က ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ရေးသား ထားတာ ရှိပါတယ်။ဦးခင်ရွှေဟာ ရိုးသားစွာလုပ်ကို စားသောက်နေသူဖြစ်ပြီး ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်ဖြင့် အလှူဒါနတွေ များစွာလုပ်ဆောင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းအနေဖြင့် စင်ကာပူ၊ အမေရိကား စသောနိုင်ငံများတွင် ငွေကုန်ကြေးကျခံ သွားရောက် သုံးဖြုန်းနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားတွင် မီလျံနာဟူသည့် ဂုဏ်ပုဒ်ခံယူပြီး သွားရောက်နေနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသော် လည်း တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ၎င်း၏ စေတနာနဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်ကို သိစေရန် ဦးခင်ရွှေက ထည့်သွင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။အရပ်သား ဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အားကစား ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း ကလည်း ခြောက်လအတွင်း ကိုယ်ပိုင်ငွေ ကျပ်သိန်းတသောင်းကျော် အကုန်အကျခံ နိုင်ငံတော်အတွက် သူ့အိပ်ထဲကနေ စိုက်ပြီး သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် အဲလောက်ငွေကြေးမျိုးကို ကိုယ့်အိပ်ထဲက စိုက်ထုတ်ဖို့ ဆိုတာ မီဒီယာသမားများရော အတိုက်အခံအဖွဲများပါ အိပ်မက်မမက်ဖူးကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်သော်ငြားလည်း လုပ်နေသူကိုလည်း အကောင်းမမြင်ပဲ အဆိုးတွေမြင်နေကာ အကုသိုလ်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေကြပါတယ်။ ဦးတင့်ဆန်းအနေနနဲ့ နိုင်ငံအတွက် အခုလို အများကြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အဖွဲ့ကမှ ဆုပေးတာတွေ၊ ပါရဂူဘွဲပေးတာတွေ မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ Myanmar Express
သတင်းမှား တစ်ခုကို 7Day News Journal က နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က တင်ခဲ့ပါတယ်။မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနကလည်း ကိုယ်တိုင်သတင်းမရှာ မလေ့လာပဲ 7Day News Journal ကနေ ကော်ပီလုပ်ပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာလိုတင်မက အင်္ဂလိပ်လိုပါတင်ပြီး သူများဆီက သတင်းနဲ့ လုပ်စားခဲ့ပါတယ်သတင်းမှားချိန်မှာတော့ 7Day News Journal က အခုလို တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။္တသတင်းကိုသာ ကော်ပီ ယူပြီး စိတ်ဓာတ်နဲ့အကျင့်စာရိတ္တကို ကော်ပီမယူနိုင်တဲ့ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနကတော့ အတိုက်အခံ မီဒီယာတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အရှက်မရှိ သိက္ခာမဲ့စွာနဲ့ပဲ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး နေခဲ့ပါတယ်။ တောင်းပန်တာတွေ ဖြေရှင်းတာတွေ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သတ်ပြီး ပြည်သူအများက မဇ္ဈိမ ကို ရှုံ့ချနေကြပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြကြောင်း သိရပါတယ်။ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန သာမက ဧရာဝတီသတင်းဌာနနဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းဌာနများကိုလည်း & Day News Journal ကို အတုယူကာ တောင်းပန်သင့်ကြောင်းကို http://goldenmyanmarnews.blogspot.com/2011/11/7-day-news.html မှာ ရေးသားထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွဲပါးစောင်းတီး အတိုက်အခံတွေကတော့ အတိတ်မေ့သလိုလို ရွှေပျောက်သလိုလိုနဲ့ ဆက်ပြီး ရူးချင်ဟန်ဆောင်နေကြပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်က ဂျာနယ် တစ်စောင်က သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် ရက်ပေါင်းများစွာ စိတ်ထဲမှာ ဖျောက်လို့မရအောင် စွဲထင်နေတယ်။ စိတ်လက်မ ကြည်မသာလည်း ဖြစ်ရတယ်။ပွဲသဘင်ပေါတဲ့မြို့မန္တလေးမြို့မှာ ဒီနှစ်အငြိမ့်အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့သာ ရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို အံ့သြမိတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ အထပ်ထပ် စဉ်းစားကြည့်တယ်။ မန္တလေးကလူတွေကို ကိုယ်တိုင်မေးကြည့်တော့မှ ဟုတ်တယ်ဆိုတာ မယုံချင်ဘဲ ယုံလိုက်ရတယ်။ ရှေးက မန္တလေးဆိုတာ မြန်မာပြည်က ဘယ်မြို့နဲ့မှ မတူအောင် ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ပေါများတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ ဆယ့်နှစ်လရာသီ ပွဲပြတ်တယ်မရှိဘူး။ ကိစ္စကြီးငယ်ရှိလို့ ညဘက် အသွားအလာလုပ်ရင် အငြိမ့်စင်တွေ ဇာတ်စင်တွေနဲ့ ပိတ်မနေတဲ့လမ်းကို အတော်ရှာပြီးသွားရတယ်။ မန္တလေး က ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ဘုရားတစ်ဆူ အနည်းဆုံးရှိတယ်။ တချို့ရပ်ကွက်ဆို နှစ်ဆူရှိတယ်။ ဘုရားပွဲ၊ ကထိန်ပွဲ၊ ဘာပွဲဖြစ်ဖြစ် အငြိမ့် တစ်ခုနဲ့ ဇာတ်တစ်ခုပါမြဲပဲ။ ပြီးတော့ ၂ရက် ကျင်းပမြဲဖြစ်တယ်။ တချို့ချမ်းသာ တဲ့ရပ်ကွက်ဆိုရင် အငြိမ့်နှစ်ခုလောက်ထိ ထည့်လေ့ရှိတယ်။သဘင့်တက္ကသိုလ်ပွဲတွေများတော့ အငြိမ့်တွေ ဇာတ်တွေလည်း များတယ်။ အငြိမ့် အဖွဲ့ပေါင်း နှစ်စဉ် လေးငါးခြောက်ဆယ် ရှိတယ်။ ရုံနဲ့ကတဲ့ ဇာတ်ကြီးနဲ့ ကြည့်ချင်ပွဲကတဲ့ ဇာတ်ကလေးတွေလည်း အတော်များတယ်။ ရဟန်း၊ သံဃာများ စာဝါလိုက်ကြရာမှာ မန္တလေးမှာ လာပြီး စာမသင်ဖူးသေးရင် စာတတ်ပြီလို့ မယူဆကြဘူး။ အဲဒီလိုပဲ သဘင်သည်များလည်း မန္တလေးလာပြီး ပညာမဆည်းပူးရသေးရင် ပညာစုံပြီ၊ သဘင်သည် လားမြောက်ပြီလို့ မယူဆဘူး။ ဒါကြောင့် သဘင်လောကမှာ မန္တလေး ကို သဘင့်တက္ကသိုလ်လို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါတွေအပြင် တခြား ထူးခြားချက်တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဥပမာ ဘုရားဆင်းတုတော် တွေထုလုပ်တဲ့ ကျောက်ဆစ် လုပ်ငန်း၊ ကြေးသွန်း လုပ်ငန်းနဲ့ နိဗ္ဗာန်ကုန် လို့ခေါ်တဲ့ ဘုရားထီးတော်၊ စိန်ဖူးတော်၊ ပလ္လင်တော်၊ မှန်စီရွှေချလုပ်ငန်း စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကြီးအကျယ် လုပ်တာဆိုလို့လည်း မန္တလေးတစ်မြို့ပဲရှိတယ်။ မန္တလေးမြို့မှာတောင် ဘုရားကြီးအရှေ့မုခ်နဲ့ အနောက်မုခ် ကျောက်ဆစ်တန်းတို့မှာပဲ လုပ်ကြတယ်။အနုပညာမြို့တော်ဘုရားရွှေချတဲ့ ရွှေဆိုင်းလုပ်ငန်း ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည် ဘယ်အရပ်ဘယ်ဒေသ မှာမှမရှိဘူး။ မန္တလေးက မျက်ပါးရပ် တစ်ခုတည်း မှာပဲလုပ်တယ်။ မြန်မာပြည်အနှံ့က ဘုရားပုထိုးစေတီများ ရွှေချဖို့ မန္တလေးကပဲ မှာယူကြရတယ်။ ရှင် ပြု၊ နားသတွေမှာ ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ မောင်ရင်လောင်းဝတ်စုံ၊ ဦးသျှောင်၊ မကိုဋ်၊ စလွယ်၊ ဟင်္သာခြေနင်းနဲ့ နားထွင်းသူ ဝတ်ဆင်ရတဲ့ ဒွါဒယာ ဘယက်နဲ့ စည်းပုံစတဲ့ ရွှေချည်ထိုး ပစ္စည်းများလည်း မန္တလေးက ရွှေချည်ထိုးရပ် တစ်ခုတည်းမှာပဲ လုပ်တယ်။ ဒါတွေကြောင့် ရှေးခေတ် အဆက်ဆက်ကပဲ မန္တလေးကို ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာမြို့တော်လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။အလုပ်ကို စွန့်တယ် မန္တလေးကို မစွန့်ဘူးမင်းနေပြည်တော် အဖြစ်ကနေ ဒုတိယ မြို့တော်အဆင့်ကို လျှောကျသွားပေမယ့် မန္တလေးသားတွေက ဝမ်းမနည်းဘူး။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာမြို့တော်အဖြစ်ရှိ နေရတာ ကိုပိုပြီး ဂုဏ်ယူကြတယ်။ ပိုပြီးမြတ်နိုးကြတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ ရာထူးတက်ပြီး ရန်ကုန် ကို ပြောင်းရတယ်ဆိုရင် ရာထူးကို မယူဘဲ မန္တလေးမှာပဲ တွယ်ကပ်ပြီး နေကြတယ်။ ငြင်းမရဘူးဆိုမှ မန္တလေးက ခွာတယ်။ တချို့နောက်ခံ တောင့်တင်း သူများဆိုရင် အလုပ် ကိုစွန့်လိုက်တယ်။ မန္တလေးကိုမစွန့်ဘူး။ မန္တလေးသားတွေ မန္တလေး ချစ်တာကို ရန်ကုန်က လူတွေက နားမလည်နိုင်ကြဘူး။ အမြင်ကျဉ်းတယ်။ ဒေသစွဲကြီးတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။အမြင်ကျဉ်းတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ ဒေသစွဲကြီးတာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေကိုချစ်တာ၊ တွယ်တာ မြတ်နိုးတာဖြစ်တယ်။ အမြင်ကျဉ်းပြီး ငါမြို့မှငါ့မြို့၊ ငါ့လူမျိုးမှ ငါ့လူမျိုး ဆိုတဲ့ သဘောမရှိဘူး။ မင်းတုန်းမင်း တရားကြီး မန္တလေးမြို့ကို စတည်ကတည်းက အလောင်းမင်း တရားလက်ထက်မှာ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်လာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ယိုးဒယား လူမျိုး လက်မှုပညာသည်တွေနဲ့ သဘင်ပညာရှင်တွေကို ရပ်ကွက်တည်ပေးပြီး စုဝေးနေထိုင်စေခဲ့တဲ့ အတွက် မြန်မာတွေနဲ့ ထွေးရော ယှက်တင် နေခဲ့ကြတယ်။ ပသီမျိုး နွယ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အတွက်လည်းရပ်ကွက်တွေ တည် ပေးပြီး ဗလီကျောင်းကြီးတွေ တခမ်းတနားဆောက်လုပ်နေထိုင် စေခဲ့တယ်။ အမေရိကန်သာသနာ ပြုဆရာ ဒေါက်တာမတ်ကြီးကို လည်း သာသနာပြုခွင့်ပေးရုံမက စာသင်ကျောင်းပါဆောက်ပေးပြီး စာသင်စေခဲ့တယ်။ အဲဒီကျောင်းမှာ သားတော်တွေကို အပ်နှံပညာသင် ကြားစေခဲ့တယ်။ဆွေလိုမျိုးလိုနေကြမန္တလေးမှာ ရတနာပုံ နေပြည်တော်သတင်းစာ ထုတ်ဝေတော့လည်း တရုတ်လူမျိုး ဦးအဟီးကို အယ်ဒီတာခန့်ပြီး ဘိုးဝဇီရနဲ့ အတူ လုပ်ကိုင်စေခဲ့တယ်။ မြန်မာလူမျိုးများ ဟာ ရှေးဟောင်းအစဉ်အဆက် ကတည်းက ဘာသာခြားတွေ၊ လူ မျိုးခြားတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီး ရင်းရင်းနှီးနှီး နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ဇာတ်ခွဲတာတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံတာ တွေ မရှိဘူး။ အားလုံးကို ဆွေမျိုးလိုပေါင်းသင်းတယ်။ သဘာဝကိုက ခင်မင်တတ်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံတယ်။ အဲဒီတော့ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားတွေကလည်း တုံ့ပြန်ပြီး ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ ဆွေမျိုးလို ဆက်ဆံကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခပ်ငယ်ငယ်အချိန် ရောက်တော့ ဘာသာခြား လူမျိုး ခြားရယ်လို့တောင် မထင်မှတ်ကြတော့ဘူး။ အားလုံး ရောရောနှော နှောနဲ့ သူ့အိမ်ကိုယ်ဝင်စား၊ ကိုယ့်အိမ်သူဝင်စား ဖြစ်နေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာ ဘောလုံးကန်ဖက် သူငယ်ချင်း နန်ဒူးတို့ အိမ်ရှိတယ်။ သူက ဟိန္ဒူလူမျိုး ဖြစ်တယ်။ ညာဘက်ကတော့ တရုတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖြစ်တယ်။ အဖေ တစ်ခု သမီးတစ်ခု နေကြတာမို့ ကျွန်တော် တို့ကိုပဲ ဆွေမျိုးလို မှတ်ယူထားကြတယ်။ဗမာတွေဖြစ်ကုန်ကြအိမ်နောက်ဘက်မှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းထွန်းကြည်၊ ထွန်းလှ၊ ထွန်းအေးတို့ကျတော့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ။ ဒါပေမဲ့ လဖုန်းကျောင်းမှာ အတူနေကြတာဆိုတော့ အမြဲတမ်း လည်ပင်းဖက် နေခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ တချို့များဆို တရုတ်ရယ်၊ ကုလားရယ်လို့ အခေါ်သာ ရှိတော့တယ်။ တရုတ်စကား၊ ကုလားစကားတောင် တတ်ကြတော့တာ မဟုတ်ဘူး၊ အားလုံး ဗမာစကားပြောပြီး ဗမာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကျတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲ ရောက်လာ ကြသူတွေက ဗမာစကား တစ်လုံးမှ မတတ်ကြလေတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ဘူး။ အုတ်တံတိုင်း အမြင့်ကြီးတွေ ကာရံပြီးသူတို့ဟာ သူတို့သီးခြားနေ ကြတယ်။ လမ်းမှာတွေ့လို့ ကိုယ်က ဗမာ့ထုံးစံအတိုင်း ပြုံးပြရင်လည်း မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ မတူသလိုမတန်သလို ကြည့်ပြီး မျက်နှာလွှဲသွားကြတယ်။ သူတို့က လာမရော သလို သူတို့ကို လာရောတာလည်း မကြိုက်ဘူး။သူတို့လူများစုဘယ်သူနဲ့မှမရောဘဲ ခပ်တင်းတင်း နေနိုင်မှာပေါ့။ သူတို့လို လူမျိုးတွေက နေရာတိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ ရှိနေကြတာကိုး။ တချို့ရပ်ကွက်တွေဆို သူတို့တောင် လူများစု ဖြစ်နေသေးတယ်။ မူလက သောင်းဂဏန်းလောက်သာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အိမ်တွေ မြေတွေကို သူတို့က သိန်းရာချီပေးပြီး ဝယ်ကြလေတော့ ရွာခံမြို့ခံတွေက ရောင်းပြီး မြို့သစ်တွေဘက် ပြောင်းကုန်ကြတယ်။ နောက်တော့ ရာဂဏန်းက ထောင်ဂဏန်း၊ အခုဆို သောင်းဂဏန်းအထိ တောင်ပေးပြီး ဝယ်ကြတော့ ဗမာတွေက မရောင်းဘဲ မနေနိုင်ကြတော့ဘူးလေ။ဘုရားတွေ ကျီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လိုရလို့ ဘယ်လောက်ထိများပေါနေသလဲ မသိတော့ဘူး။ ဒီလူတွေက အခုဆို မန္တလေးကနေပြီး ထားဝယ်တို့ ကျောက်ဖြူတို့အထိပါ သွားပြီး ဝယ်နေကြတယ်တဲ့။ ဗမာစကားသာ တစ်လုံးမှ မတတ်တာ သူတို့က စီးပွားရေးတော့ အကွက်သိပ်မြင်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း နယ်ပယ် ချဲ့ထွင်နေလိုက်ကြတာ ဘယ်သူမှ လိုက်မမီနိုင်တော့ဘူး။ မြို့တွင်းအချက်အချာနေရာ တွေမှာသူတို့က လူများစုလိုဖြစ်လာတော့ အစဉ်အလာ မပျက်ကျင်းပတဲ့ ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲတွေ၊ ကထိန်ပွဲ တွေလည်း မကျင်းပနိုင်တော့ဘူး။ ဘုရားဒကာတွေက အဝေးကို ရောက်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ ဘုရားတွေဆိုတာလည်း ကျီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ် ဖြစ်နေကြတော့တယ်။ ဘုရားပွဲတွေ မကျင်းပနိုင်တော့ဘူး ဆိုတော့ အငြိမ့်တွေ ဇာတ်တွေလည်း ဘယ်ကရတော့မှာလဲ။ အစကတော့ ဇွဲမလျှော့ဘဲ တင်းခံသေးတယ်။ ကြာတော့ ဘာသားနဲ့ထုထားလို့ ခံနိုင် တော့မှာလဲ။ အငြိမ့်တွေ ဇာတ်တွေ က တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ပြုတ်ကုန်ကြ ရပါတော့တယ်။ဗမာစာပါ ပျောက်မှာစိုးယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေ ပျောက်ဆုံးသွားရတာဟာ ဘာနဲ့မှကို မတူတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုပပျောက်ရင် လူမျိုးပါပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာပျောက် ပြီးတဲ့နောက် ထပ်ပျောက်မှာက ဗမာစကား ဖြစ်တယ်။ အခုတောင် မြို့ထဲက ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ ဗမာစာနဲ့ရေးတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် အတွေ့ရ နည်းပြီး အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ တရုတ်စာ ဆိုင်းဘုတ်တွေချည်း တွေ့ရတော့တယ်။ မူကြိုကျောင်းနဲ့ ကလေး ထိန်းကျောင်း တွေဆိုရင်လည်း တရုတ်စာပါသင်ပေးမှ မိဘတွေက အပ်ချင်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် မန္တလေးသားများက မန္တလေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဖို့ အခွင့်ရတိုင်း ပြောနေရေးနေကြရတာဖြစ်တယ်။ ဒေသစွဲကြီးလို့ အမြင်ကျဉ်းလို့ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ မန္တလေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာဟာ ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။လူထုစ်ိန်ဝင်း